By Htet Wai Aung - April 01, 2021
ဧပြီ ၁ ရက်နေ့။ ကနေ့ က တော့ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူတွေ ကို သတိတရ အနေနဲ့ flower strike ဆိုပြီး ဆန္ဒပြကြတယ်။
စစ်တပ်ပိုင် ဂန္ဓမာ whole sale နဲ့ ပန်းဆိုးတန်းက Ruby Mart မီးလောင်တယ်။ မီးလောင်ပြီး CNN သတင်းထောက်ကို ခေါ်ပြတယ်။ မီးက ဘယ်သူရှို့လဲ အသိသာကြီး။ ဂန္ဓမာ ဆိုအထဲမှာ စစ်တပ်က တပ်စွဲထားတဲ့ အပြင် မီးလာငြိမ်းတဲ့ မီးသတ်သမားတွေကိုပါ သေနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့ပြီး မလာနိုင်အောင် လုပ်ခဲ့တာ။ ပြည်သူတွေက အကြမ်းဖက်တဲ့ ပုံစံကို CNN သတင်းထောက်ကို ပြချင်လို့ ရှို့တာ အသိသာကြီး။ ညနေပိုင်းမှာ Wireless Broadband Internet တွေ ဖြတ်မယ် ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာ ISP တွေကနေ စာပို့လာတယ်။ မနက်ဖြန်က စပြီး ပြတ်ပြီပဲ။ FTTH တွေတော့ ကျန်နေသေးတယ်။ FTTH တခုပဲ ကျန်တော့တယ် လို့ ဆိုရမယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက အခုဒီလို အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ Myanmar Computer Fedaration က လူတစ်ချို့ ပါပြီး အခါတော်ပေးနေတယ်လို့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ချို့ က ပြောတယ်။ CRPH ကတော့ EAOs တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဆက်လုပ်နေတယ် လို့ မြင်တယ်။ CRPH ကို ဝေဖန်တဲ့ သူတွေကိုလည်း မြင်နေရတယ်။ CRPH က ဝေဖန်အကြံပေးဖို့ လိုတယ် လို့လည်းမြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ ဘုံရန်သူက အရေးကြီးတယ် မလား။ UN ရဲ့ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေး မှာ R2P ဝင်ဖို့အတွက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာ တရုတ်က ဗီတိုအာဏာသုံးပြီး ပယ် တယ်လို့ သတင်းထွက်တယ်။ စစ်သူပုန်အစိုးရက မြန်မာကုန်သည်တွေ နိုင်ငံခြားကိုယ်စားလှယ်တွေ ကို ကုန်စည်စီးဆင်းမှု့မြန်ဆန်စေရေးအတွက် UMFCCIမှာ အစည်းအဝေးခေါ်တယ်။ မြန်မာငွေဈေး ကျသွားတာ ငွေလဲနှုန်းက 1 USD ကို ၁၆၀၀ ကျပ်ထိ ဖြစ်သွားတယ်။ ငွေလဲကောင်တာတွေမှာတောင် လဲချင်တိုင်း လဲမရတော့ဘူး။ ZOMI တွေကလည်း ZOMI FEDERAL UNION တည်ထောင်ပြီး ပြည်သူနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ ကြေညာစာထုတ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငွေစက္ကူထုတ်တာမှာ နည်းပညာနဲ့ ကုန်ကြမ်းရောင်းတဲ့ Giesecka & Devrient Company က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း Support နဲ့ ကုန်ကြမ်းရောင်းချခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ် လို့ စာထုတ်တယ်။ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံကို လိုသလောက် ရိုက်ထုတ်လို့ မရတော့ဘူး။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ ကို အတော်အသင့်ထိန်းလိုက်နိုင်မယ် လို့ ဆိုရမယ်။ စစ်သူပုန်အစိုးရ ကျင်းပတဲ့ ကျောက်မျက်ပြပွဲ ကို လူတစ်ယောက်မှ မလာတာကိုလည်း MRTV မှာ အရင်က Video တွေနဲ့ လူစည်ကားနေပါတယ် ဆိုပြီး ဝါဒဖြန့်တယ်။ စစ်တပ်ဝန်းထဲမှာတော့ MWD , MRTV ပဲ ကြည့်ကြတာကိုး။ သူများတွေသာပြောနေတာ ခုဆို အင်တာနက်ဖြတ်လိုက်တော့ အားကိုးစရာက ရေဒီယိုပဲ ရှိတော့တယ်။ ဖုန်းနဲ့ sms နဲ့တော့ သတင်းတွေ ပို့လို့ ရနေသေးတယ်။ Video, Photo တွေတော့ social media ပေါ်တက်လာတာ နည်းသွားပြီ။
ဧပြီ ၂ ရက်နေ့။ အင်းစိန် ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာ CNN သတင်းထောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ သူတစ်ချို့ကို ဖမ်းတယ်။ CNN သတင်းထောက်နဲ့ စကားပြောမိတဲ့ YUFL က ကောင်မလေး ကို ဖမ်းသွားတယ်။ မုံရွာဘက်မှာတော့ ပစ်တာခတ်တာတွေ ပိုကြမ်းလာတယ်။ ပြည်သူဘက်ကလည်း ရရာလက်နဲ့နဲ့ ပြန်တိုက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ မနေ့ တစ်နေ့ကပဲ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲမယ် ဆိုတဲ့ စာကို စစ်သူပုန်အဖွဲ့က ထုတ်တယ်။ ကနေ့ကျ KNU ဘက်ကို အင်တိုက်အားတိုက် တိုက်စစ်ဆင်တယ်။ လေယာဉ်တွေနဲ့ပါ တိုက်စစ်ဆင်တယ်။ နေပြည်တော်မှာ စစ်လေယာဉ်တွေ တောက်လျှောက် အတက်အဆင်းလုပ်နေတယ်။ တပ်မဟာ ၁ ဘက်ကို ည ၇ နာရီကျော်မှာ စတိုက်တယ်။ ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလည်း ပြည်သူ ၆၀၀၀ ကျော် စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ MWD ကနေ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေကို ၅၀၅ ပုဒ်မတပ်ပြီး ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာကို ပြသွားတယ်။ ကျော်ကျော်နန္ဒ ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပြီး အင်အား ၁၀၀ နီးပါးသုံးပြီး သွားဖမ်းတာ မမိဘူး။ မနေ့က မီးလောင်တဲ့ ကိစ္စအတွက် မီးအာမခံထားတဲ့ cpmpany ကနေ လျှော်ကြေးပေးဖို့ အကြောင်းပြန်တဲ့ စာ က Facebook ပေါ် တက်လာတယ်။ ရယ်ရတာက date တွေ က ကြိုတပ်ထားသလို ဖြစ်နေတာပဲ။ ရန်ကုန် ဗဟန်းမှာ ရှိတဲ့ ဆရာကြီး ဇော်ဝေစိုးရဲ့ အိမ်ကို မီးရှို့ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ပြည်သူက ဝိုင်းပြီး ငြိမ်းလိုက်လို့ အထိအခိုက်မရှိလိုက်ဘူး။ ပဲခူးက ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေကို အခမဲ့ ဆေးကုပေးနေတဲ့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ နေမျိုးကို စစ်သူပုန်တွေက လာဖမ်းသွားတယ်။
မင်္ဂလာဒုံ ပေါက်ကုန်းရပ်ကွက် ကို စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာတယ်တဲ့။ ကြေညာတာကလည်း ကြည့်ဦး။
ရပ်ကွက်က လူတွေက အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကို လက်မခံလို့ စစ်တပ်က ရက်ကွက်ရုံး ရှေ့က balckboard မှာ စာလာရေးသွားပြီး ကြေညာတာ။ မန္တလေး မှာ မော်တော်ပီကယ်တွေကို ရဲ ယူနီဖောင်း ပြောင်းဝတ်ပြီး လှုပ်ရှားခိုင်းတယ် လို့ သိရတယ်။ နေပြည်တော်က မြို့တော်ဝန်ရေကစား မဏ္ဍပ် ကို အပြီး ပြန်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ အစက ဘာမှ မဖြစ်သလို တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ် ဆိုတဲ့ အကွက်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ သင်္ကြန်ကျမလို့ကို သူတို့ဘက်က အခါတော်ပေးဆရာတွေက စစ်တပ်ရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ်မကူးတော့ဘူးလို့ ဟောလို့ သင်္ကြန်ကို လုပ်ဖို့ စီစဉ်ပြီးမှ ဖျက်လိုက်ရတာ။
ခေတ်သစ်မီဒီယာက တင်တဲ့ ပိုစ့်အရ မီဒီယာတွေ ကို သတင်းပေးပို့နိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို စစ်သူပုန်တွေက လိုက်ပိတ်နေတဲ့ အတွက် တစ်ခြားနိုင်ငံက phone number တွေကို သုံးပြီး အကောင့်တွေ ဖွင့်ရတယ်။
ဧပြီ ၃ ရက်နေ့။ အင်တာနက်တွေ ပိတ်ထားပေမယ့် အရင်က Thai Simcard တွေနဲ့ roaming သုံးလို့ ရနေတာကနေ အခု roaming တွေပါ ပိတ်လိုက်တဲ့ အပြင် Sim2Fly app မှာပါ မြန်မာအတွက် roaming package တွေပါ မရှိတော့ဘူး။ မြန်မာငွေတန်ဖိုးက ၂၀% လောက် ကျသွားတယ်။ Petronas Offshore ကလည်း ရဲတံခွန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့တူးဖော်မှု့ကို ရပ်နားပြီး CDM လုပ်တဲ့ အထဲ ပါဝင်လာတယ်။ တရုတ်နယ်စပ်မှာ တရုတ်စစ်သားတွေ Gas pipeline ကာကွယ်ဖို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ မြန်မာဘက်ကို ဝင်လာနေပြီ။ PPST ရဲ့ ကနေ့ အစည်းအဝေးမှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ပံ့ပိုးမယ် CRPH နဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမယ် ဆိုပြီး ယာယီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ကြီး ရွက်ဆစ် က မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်ပြောသွားတယ်။ KIA ကလည်း သူတို့ဘက်ကို ပူးပေါင်းပါဝင်မယ့် သူတွေကို welcome ပါပဲလို့ စာ ထုတ်တယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်း တပ်မဟာ ၁၊ ၃၊ ၅ နဲ့ စစ်သူပုန်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး လူတစ်သောင်းကျော် အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီး စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီ။ မုံရွာသပိတ် က နေ့တိုင်း အရှိန်နဲ့ အားကောင်းနေတာကနေ ကနေ့ ကျတော့ ဖြိုခွဲခံရတယ်။ တရုတ်ကတော့ အာဆီယံကနေ တဆင့် မြန်မာပြည်ပြန်လည် တည်ငြိမ်ရေးကို လုပ်မယ် လို့ ဆိုတယ်။ တရုတ်ကို လုံးဝ မယုံရတာ။
ရန်ကုန်မှာ စစ်ခွေးတွေက YBS ကားတွေကိုပါ ရပ်ခိုင်းပြီး ပါတဲ့ ခရီးသည်တွေကို ကန်ကျောက် ရိုက်နှက် စစ်ဆေးတယ် လို့ သတင်းတွေမှာ ပါလာတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို စိန်ဖူးတော်အထိ ငြမ်းဆင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တက်လာတယ်။ Ooredoo ဖုန်းလိုင်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ No service ဖြစ်ကုန်တယ်။ မနေ့က ကြေညာတဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ သူတွေကို ဖမ်းဝရမ်း ထပ်ထုတ်တယ်။ အဲ့မှာ ရယ်ရတာက အဆိုတော်ချမ်းချမ်း ပါ ဓါတ်ပုံကြီးနဲ့ ပါလာတာ။ တကယ်က သူ့ဟာသူ ကလေးမွေးနေတာ၊ လက်သုံးချောင်းတောင် မထောင်နိုင်ရှာဘူး။ တကယ်လုပ်နေတာက ကိုရီးယားမှာ နေတဲ့ ဆရာမ ချမ်းမြမြသော်၊ သူ့ကို လည်း ချမ်းချမ်းပဲ ခေါ်ကြတာ။ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ချမ်းချမ်း ဆိုတာနဲ့ သိတဲ့ ချမ်းချမ်း ကို ဝရမ်းထုတ်လိုက်တော့တာပဲ။ ယုဇနမှာ defense team က လူငယ်တွေ နာမည်စာရင်းနဲ့ အတိအကျ လာ ဖမ်းတယ်။ ကျောက်မြောင်းမှာလည်း နာမည်စာရင်းစာရွက်နဲ့ကို လာဖမ်းတယ်။
ဧပြီ ၄ ရက်နေ့။ ကနေ့ မှာတော့ #EasterStrike #EasterEggStrike လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ကြက်ဥလိုက်ရှာတာနဲ့ တနေကုန်သွားတာပဲ။
Quad ဆိုတဲ့ US, Australia, India, Japan နဲ့ France တို့ရဲ့ ၅ နိုင်ငံ ပူးပေါင်း စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု့က ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ကနေ ၈ ရက်နေ့အထိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လုပ်မယ်။ စစ်သူပုန်တွေကလည်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှာ ဆင်ဖြူရှင် စစ်ဆင်ရေးဆိုပြီး ဧပြီ ၄ ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့ အထိ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မယ် ဆိုပြီး သတင်းထုတ်ပြန်တယ်။ ဟိုရေငုတ်သင်္ဘောလည်း ပါမယ် ပြောတယ်။ စစ်ရေး အရလည်း တစ်ကွေ့မဟုတ် တစ်ကွေ့တော့ တွေ့ကြဖို့ မျှော်လင့်တယ်။ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာ စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ သူတွေ ပိုပိုများလာတယ်။ ပြည်မ ကို ပါ စစ်ဖြစ်စေချင်တာ။ ဒါမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်မှာ။ မဟုတ်လို့ကတော့ လေနဲ့ ပဲ စစ်တိုက်နေကြတာ။ ဘာမှ ကို ရှေ့ကို မရောက်တော့ဘူး။ လှိုင်သာယာမှာတော့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့လိုက်တယ်။ CNN သတင်းထောက်နဲ့ စစ်သူပုန်က ဇော်မဲလုံးနဲ့ ကနေ့ အင်တာဗျူးတယ်။ CNN က ဘယ်လို သတင်းရေးမလဲ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ CRPH လည်း ပျောက်နေတာ ၂ ရက်ရှိပြီ။ ဘာတွေ လုပ်နေလဲတော့ မသိဘူး။
ဧပြီ ၅ ရက်နေ့။
၁၀ နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပြီး လူငါးသိန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဆီးရီးယားစစ်လိုမျိုး အာရှမှာ မြန်မာက ဖြစ်လာဖို့ လမ်းကြောင်းကို သွားနေပြီ။ ဒီအခြေအနေကို တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိရက်နဲ့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ ကုလသမ္မဂဟာ အဓိက တာဝန်မဲ့သူ ဖြစ်လာမယ် ( Lion Slayer )။
ပဲခူး အင်းဝင် ၆ လမ်း အရှေ့ဘက် စိန်ပန်းဘုန်းကြီးကျောင်း နား မီးလောင်တယ်။ ရန်ကုန်က မြို့နယ်တွေမှာ ဧည့်စာရင်းတိုင်ဖို့ လိုက် အော်တယ်။ မတိုင်ရင် ၃ သိန်း ဒဏ်ကြေး လို့လည်းပြောကြသလို တချို့မြို့နယ်တွေမှာ ထောင် ၃ နှစ် လို့လည်း ပြောတယ်။ စစ်သူပုန်ပိုင် သတင်းစာထဲမှာ အစိုးရဌာနတွေ အတွက် လစ်လပ်တဲ့ ရာထူးတွေ ကို ခေါ်နေတယ်။ နည်းနည်းနောနော ရာထူးတွေ မဟုတ်ဘူး။ မန္တလေးမှာ လူငယ် တစ်ယောက် လက်မှာ ထိုးထားတဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး တက်တူးကို စစ်ခွေးတွေက ဖမ်းပြီး လက်ကို ဓါးနဲ့ လှီးပြီး မီးရှို့ပစ်တယ် ဆိုပြီး သတင်း ဓါတ်ပုံတွေ တက်လာတယ်။ CNN သတင်းထောက်က လက်ရှိမြန်မာမှာ ရှိနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို twitter မှာ တင်လိုက်တယ်။ စစ်သူပုန်တွေ လိုချင်တဲ့ အတိုင်းမဟုတ်ပဲ တခြားပုံစံဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ သေချာတယ်။ စစ်အုပ်စုကတော့ သူတို့ လိုချင်တဲ့ အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဘယ်လောက်တောင် ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေမယ် မသိ။ CNN သတင်းထောက်နဲ့ စကားပြောမိလို့ အဖမ်းခံရတဲ့ သူတွေ ပြန်လွတ်တယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားက ဂြိုလ်တိုင်မှာ ရှိတဲ့ ဘုရားတွေကို ရုပ်ပွားတော် အသစ်တွေနဲ့ လဲ ပစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ယတြာချေတာပေါ့ဗျာ။ Molotov စာစဉ်ကို print version အနေနဲ့ ရော online version ရော ပါထုတ်တယ်။
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေကို ဖမ်းဝရမ်းဆက်ထုတ်တယ်။ ကိုရီးယားကား ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ကနေ့ရောဆို စုစုပေါင်း ၇၃ ယောက် ရှိသွားပြီ။ နေ့တိုင်း အပိုင်းလိုက်ထုတ်နေတယ်။ ကြည့်မြင့်တိုင် မျက်မမြင်ကျောင်းကို စစ်သူပုန်တွေ တပ်စွဲထားတယ်လို့ သတင်းရတယ်။ ဒီသတင်းသာမှန်ရင်တော့ တော်တော်ယုတ်မာတယ် လို့ ပြောရတော့မယ်။ Human shield ကိုတောင်မှ ဒီလို လူတွေကို လုပ်ရက်တယ်။ တောင်ကြီးမှာလည်း မီးလောင်တယ်။ ဘယ်သူရှို့လဲ ဗေဒင်မေးစရာမလိုဘူး။ မီးလောင်တာက အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။ မီးတောင် မလောင်သေးဘူး MWD က သတင်းတက်လာတာက တော်တော် တလွဲနိုင်တာ။ Austrilla နိုင်ငံသား ၂ ယောက် ပြန်လွတ်လာပြီး မိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ယင်းမာပင်မြို့နယ် သပြေအေးကျေးရွာမှာ ရွာလုံးကျွတ် ရွာကိုစွန့်ပြီး ထွက်ပြေးကြနေရတယ်။ ချင်းတောင်တန်းဒေသတွေမှာတော့ တူးမီးသေနတ်နဲ့ ပြန်ခုခံပြီး စစ်ခွေးတွေကို ပြန်တိုက်နေကြပြီ။ တူးမီးနဲ့တောင် စစ်ခွေးတွေ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးနေရတယ်။ ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာတော့ RCSS နဲ့ TNLA တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတယ်။
ဧပြီ ၆ ရက်နေ့။ ဘဏ်တွေမှာ လူတိုင်းငွေလာထုတ်ကြတယ်။ တစ်ရက်ကို အယောက် ၂၀ ပဲ တိုကင်နဲ့ ထုတ်ပေးတယ်။ အဲ့တာကို မနက် ၄ နာရီကတည်းက တန်းစီပြီး သွားတာတောင် မထုတ်လိုက်ရတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ တိုကင်ကိုလည်း ပြန်ရောင်းစားနေကြတာတွေ့တယ်။ တိုကင် ပြန်ရောင်းတာ ၂ သောင်း ၃ သောင်းအထိ ပေါက်တယ်။ တစ်ချို့ကကျတော့ % ပေးပြီး ဘဏ်ကလူတွေနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး ထုတ်နေကြတာလည်း ရှိတယ်။ ရှမ်းမြောက်မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်။ အရပ်သားအိမ်တွေ မီးလောင်တယ်။ ဒေသခံ ၁၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေးနေရတယ် လို့ သတင်းရတယ်။ SSPP နဲ့ TNLA က စစ်သူပုန်ဘက်ကနေပြီးတော့ RCSS ကို တိုက်တယ် လို့ ကြားတယ်။ SSPP နဲ့ TNLA က ဘယ်ဘက်ကရပ်တည်တယ် ဆိုတာ ခုထိ မသိသေးဘူး။ RCSS ကတော့ ရွက်ဆစ်ပါတော့ ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်မယ် လို့ ထင်တယ်။ ရုရှားက မြန်မာစစ်ကောင်စီ အပေါ် ဒဏ်ခတ်တာကို ကန့်ကွက်တယ် လို့ သတင်းတက်လာတယ်။ စစ်ကောင်စီက ခုထိ ကျည်အစစ်နဲ့ ပစ်တယ် ဆိုတာ ကို ငြင်းနေတုန်း။ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လေယာဉ်သုံးပြီး ဗုံးကြဲတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ လေယာဉ်နဲ့ ကင်းထောက်နေတာတွေ တော့ ရှိနေတုန်းပဲ။ ထိုင်းဘက်ကလည်း ကရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကို လက်မခံပဲ ပြန်မောင်းထုတ်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အကုန်လုံးနီးပါး စိုးရိမ်နေကြတာက ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်လာရင် CRPH နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ ဆိုတာပဲ။ CRPH ကသာ စေတနာမှန်မှန်နဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ အာမခံချက် သံဓိဋ္ဌာန်ချပြီး လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ ကိစ္စကိုလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးလို့ KNU တပ်မဟာ ၅ က ပဒိုမန်းမန်းက ပြောသွားတာ တွေ့တယ်။ လက်ရှိမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ အကုန် ကိုယ့်နယ်မြေကို အသည်းအသန် ရအောင် တိုက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ကရင်ဘက်မှာ KNU၊ ကချင်ဘက်မှာ KIA ပေါ့။ ဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်တပ်မရှိတာဆိုလို့ မြန်မာပြည်မ ကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ ရန်ကုန်၊မန္တလေး တွေပဲ လက်နက်ကိုင်ပြီး မတိုက်ကြတာ။ KNU,KIA အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ပြည်မကြီးကို ဆင်းလာပြီး တိုက်မယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Federal Army က လာတော့ လာမယ် ကြာမယ့် သဘောမှာ ရှိတယ်။ လာတာကတော့ လာ မှာ သေချာတယ်။ စစ်ရေးပြင်နေတာတွေ တွေ့နေရတယ်။ မုပွန်ရေတပ်စခန်းက အရာရှိနဲ့ တပ်သား ၁၅ ယောက် ထွက်ပြေးသွားတယ်။ မြစ်ဆုံမှာတော့ တရုတ်တွေက ရွှေတူးတာ မပျက်ဘူး။ ရန်ကုန် တောင်ဥက္ကလာမှာ YBS ၂ စီး ဗုံးခွဲ ခံရတယ်။ ဒါက ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ အစ တွေလို့ မြင်တယ်။
ဧပြီ ၇ ရက်နေ့။ ဧည့်စာရင်းတိုင်တဲ့ လူတန်းကြီးကို ရပ်ကွက်ရုံးရှေ့တွေမှာ တွေ့နေရပြီ။ မြေအောက်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ အသိ ဘော်ဒါတချို့ ဖမ်းခံရတယ်။ စမ်းချောင်း ထွေအုပ်ရုံး ဗုံးကွဲတယ်။ စစ်ခွေးတွေ ရှာဖွေရေးကို ဖိနေတယ်။ ကလေးမြို့မှာ ဖမ်းခံရတဲ့ ပြည်သူတွေကို စစ်ခွေးတွေက မျက်နှာကို အဝတ်နဲ့စည်း လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားတဲ့ ပုံတွေ တက်လာတယ်။ ကလေးမြို့မှာ အကျအဆုံးက စာရင်းမရှိတော့ဘူး။ Deadbody တောင် ပြန်မရတော့တာတွေ ရှိတယ်။ တန့်ဆည်မြို့မှာ သပိတ်စစ်ကြောင်း လူအုပ်ကြီးလိုက် တက်လာတယ်။ တက်လာတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို အင်အားသုံး ဖြိုခွဲတယ်။ ကနေ့ တစ်ရက်တည်းနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ သေဆုံးသူ ၂၆ ယောက်နဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်။ KNU တပ်မဟာ ၄ နယ်မြေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ ကွက်ခိုင်မှာ TNLA နဲ့ စစ်သူပုန်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ရှမ်းမှာက ၃ ဖွဲ့ ရှိပြီး တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းမှု့ မရှိကြဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဘုံရန်သူကို အရင် တိုက်စေချင်ပေမယ်ံ့ တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ အပြင် တစ်ခြား ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့် ခုလို ဖြစ်နေတာ လို့ ထင်တယ်။ UWSA အဖွဲ့ကလည်း စစ်တပ်နဲ့ အရင်အစိုးရရဲ့ ပြဿနာလို့ ဆိုပြီး ဒီအရေးကို လက်ရှောင်နေတယ်။
ရွှေဈေးက တစ်ကျပ်သားကို ၉ သောင်းတက်သွားတယ်။ ဘဏ်တွေမှာလည်း ငွေက အထုတ်ပဲ ရှိတယ်။ အသွင်း မရှိတော့ဘူး။ လူတွေရဲ့ ဘဏ်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ ယုံကြည်မှု့က မရှိတော့ဘူး။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု့တွေ နည်းလာတယ်။ လူတွေ ပိုက်ဆံပြတ်လာပြီ။ ဗဟိုဘဏ်ကတော့ စိတ်ချစွာနဲ့ အရင်လိုပဲ အလုပ်လုပ်ကြပါဆိုပြီး ကြေညာချက်ထုတ်တယ်။ စစ်ခွေးတွေက ယုံကြည်မှု့နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းကို သေနတ်နဲ့ လုပ်ချင်နေတာ ဘယ်လို နားလည်အောင်ပြောပြော သိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။
CDM တွေ ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူး။ နောက်နေ့မှ ပြန်လိုက်ကြည့်ရဦးမယ်။ မတ် ၂၇ ရက်နေ့ က အမေရိကန်စင်တာကို သေနတ်နဲ့ ပစ်တဲ့ သူကို မာစီဒီးကားနဲ့ အတူ ဖမ်းမိတယ်လို့ စစ်သူပုန်တွေက ကြေညာတယ်။ ဘယ်လိုမှ ယုံချင်စရာ အကြောင်းကို မရှိတာ။ ဖမ်းမိတဲ့သူက ရွှေပုဇွန် က ပိုင်ရှင်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ ဆိုတော့ ရွှေပုဇွန်က လူကို ပုဒ်မတပ်ပြီး ဆွဲတာပဲ နေမယ်။ ဒီသတင်းကတော့ ကျွန်တော် သေချာ မသိသေးဘူး။ UK မှာ စစ်သံအမတ်က ပြည်သူ့သံအမတ် ကို အာဏာသိမ်းတယ်။
သင်္ကြန်ပွဲတော် မဆင်နွဲဘူးလို့ စာတွေ ထုတ်ထားတာတွေ့ပါတယ်
ဆိုလိုတာက ကားတွေနဲ့ ရေပက်ခံ မထွက်ပါဘူး။
သီချင်းတွေ ဖွင့်ပြီး မက ကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ကူးရပါမယ်။ အရင်လို အိမ်မှာ အတာအိုးထိုးရမယ်။ ဥပုဒ်စောင့်ကြမယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာလည်း ပရိတ်ရွတ်ရမှာပါ။
ဧပြီ ၈ ရက်နေ့။ အစိုးရ ၂ ဆက် တိုင် ဒုဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးဆက်အောင် အဖမ်းခံရတယ်။ PSI စလောင်းရှိတဲ့ အိမ်တွေကို လိုက်ပြီးတော့ စလောင်းတွေ လိုက်သိမ်းတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ PSI Corporation ကနေ MIZZIMA နဲ့ DVB channel ၂ ခု ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ ပြည်သူတွေကို သတင်း အမှောင်ချဖို့ ကြိုးစားနေတာ တဆင့်တက်သွားပြီ။ ရေဒီယိုကိုပဲ အားကိုးရတော့မယ်။ ဒါတောင် ရေဒီယိုထုတ်လွင့်မှု့တွေက အသားမကျသေးဘူး။ နိုင်ငံက နေ့ချင်းညချင်း ဆုတ်ယုတ်သွားတာ။ KIA နယ်မြေမှာ ရှိတဲ့ ယုဇန company က သိမ်းယူထားတဲ့ မြေတွေကို ဒေသခံတွေက ပြန်ယူတယ်လို့ သတင်းတက်လာတယ်။ KIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ လိုင်ဇာကို စစ်သူပုန်တွေက လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တယ် လို့ ဒေသခံတွေက ဆီက သတင်းရတယ်။ အမေရိကန်က မြန်မာ့ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူတယ်။ CRPH က နည်းနည်း ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်သွားနေတယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြည့်တွေးနေရတယ်။ ကြားရတာကတော့ CRPH က ပြည်တွင်းစစ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်နေပုံပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ရှောင်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ လူထုရဲ့ စိတ်ဓါတ်က အမြင့်ဆုံးကို ရောက်နေတယ် နဲ့ ပြည်သူကိုယ်တိုင်ကိုက စစ်ကို မျှော်လင့်နေတာလေဗျာ။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေကို ဒိုင်ယာလော့ခ်နဲ့ ပြောနေရတာ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာ။ အစကတည်းက ဒိုင်ယာလော့ခ်နဲ့ ပြောလို့ရနေရင် စစ်အာဏာသိမ်းမှု့ဆိုတာ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းကိုမရှိတာ။ Twitter မှာ MilkTeaAlliance အတွက် emoji ရပြီလို့ Twitter က ကြေညာတယ်။
ဧပြီ ၉ ရက်နေ့။
ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ RFA အင်တာဗျူးအရ
၁။ ဧပြီထဲမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (သို့) မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့မယ်။
၂။ FA က လာမယ် ကြာမယ်။ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ထောင်မှ အတည်ဖွဲ့မယ့်သဘောရှိတယ်။
၃။ CRPH က ဦးဆောင်ပြီး အခုစစ်တိုက်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ ( ဒါကတော့ အစောကတည်းက CRPH က စစ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ )
မာန်အောင်ကျေးရွာအနီး KNU စခန်းကို စစ်သူပုန်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်တယ်။ လေးကေ့ကော်မြို့သစ်နဲ့ ဖလူးဒေသတွေမှာ စစ်သူပုန်တွေရဲ့ လေယာဉ်တစ်စီး ကင်းထောက်သဘော ဝဲ နေတယ်။ KIA ဘက်မှာလည်း ပစ်ခတ်မှု့တွေရှိနေတယ်။ မနေ့က မအလ ကိုယ်စားလှယ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့် ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ CRPH ကိုမထောက်ခံဖို့ ပန်ဆန်းက UWSA ကိုသွားဆွေးနွေးတော့ ဝမ်ဟိုင်းက SSPP နဲ့အရင်ညှိပါ၊ သူတို့သဘောတူရင် ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့် ရာပြည့်တို့က SSPP ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်တို့နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတယ်။ SSPP ကမဆွေးနွေးချင်တော့ ရဟတ်ယာဉ်ကို မိုင်းနောင်မှာဆင်းပြီး မိုင်းရှူး မိုင်းနောင်ကြားမှာ SSPP ကအတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့နဲ့ပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းပြန်တာကိုဝမ်ဟိုင်းအထိလာပြီး ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းခွင့်တောင်းတာနဲ့ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့ကပစ်လိုက်တာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ရဲ့ PSO နဲ့ ရမခတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဇော်အေး ၂ ယောက်ထိသွားလို့ စစ်ရေးတင်းမာနေကြပြီလို့ကြားတယ်။ ပဲခူးမှာ ဒီနေ့ တနေကုန်ပစ်ခတ်မှု့တွေဖြစ်နေပြီး လူ အယောက် ၆၀ ခန့် သေဆုံးတယ်လို့ သတင်းရတယ်။ အလောင်းတွေလည်း ပြန်မရဘူး။ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါ ပစ်တယ်။ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အဖမ်းခံရတယ်လို့ သတင်းတွေ တက်လာတယ်။ အတည်ပြုမယ့် သူတော့ မရှိဘူး။ UN နဲ့ CRPH က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် နဲ့ meeting လုပ်တယ်။ CDM လုပ်တဲ့ တက္ကသိုလ်က ပါချုပ်တွေ အပါအဝင် ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေကို အလုပ်ထုတ်စာ ထွက်လာတယ်။ အလုပ်ထုတ်စာ အပြင် စစ်သူပုန်ပိုင် ကြေးမုံ သတင်းစာမှာ ဌာနဆိုင်ရာ တွေ အတွက် အလုပ်ခေါ်စာ တွေ့တယ်။ လက်ကျန် FTTH internet ကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေထွက်နေတယ်။
ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့။ FTTH တွေ အင်တာနက် ဖြတ်မယ် ဆိုပြီး ကောလဟာလတွေ ထွက်ပေမယ့် ကနေ့ ၁၀ ရက်နေ့ မှာ အင်တာနက် သုံးလို့ ရနေသေးတယ်။ တကယ်တမ်း အင်တာနက်ပိတ်တာက စစ်ခွေးတွေကို brainwash လုပ်ဖို့လည်းပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ အခြေအနေကို သတင်းအမှောင်ချထားပြီး သူတို့ မှိုင်းဆက်တိုက်လို့ရအောင် လိုရာခိုင်းလို့ရအောင် အင်တာနက်ဖြတ်ထားတာလို့ ယုံတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ကို အကြောက်တရားသွင်းတာ။ ကိုယ်တွေကို အကြောက်တရားသွင်းတာ မအောင်မြင်ပေမယ့် စစ်ခွေးတွေကို အင်တာနက်ပိတ်ပြီး မှိုင်းတိုက်တာတော့ အောင်မြင်နေတယ် လို့ ဆိုရမယ်။ ခမရ ၅၂၈ က ဗိုလ်ကြီး လင်းထက်အောင် လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိတယ် လို့ RFA က သတင်းတက်လာတယ်။ စစ်အုပ်စုက ခန့်အပ်တဲ့ သူတွေကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုဘူးလို့ CRPH က စာထုတ်တယ်။ အသစ်ဖွဲ့မယ့် သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုလည်း အသိအမှတ်မပြုဘူး လို့ လွတ်လပ်သော သတင်းသမားများက ကြေညာတယ်။ တမူး ပစ်ခတ်မှု့မှာ ပြည်သူဘက်က ၂ ဦးကျဆုံးပြီး စစ်ခွေး ၁၈ ကောင် သေဆုံးတယ်လို့ ကူကီးတပ်က ကြေညာတယ်။ ကနေ့တနေကုန် ကြေညာစာတွေချည်းပဲဗျ။ အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ဖုန်းတွေစစ်တယ် လူတွေစစ်တယ် လို့ ဆိုပေမယ့် အသိတစ်ယောက် ကတော့ အစစ်အဆေး မရှိပဲ ခရီးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့။ ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ်မှာ KIA နဲ့ စစ်သူပုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး အများအပြားကျဆုံးတယ်လို့ သတင်းတက်လာတယ်။ မြစ်ကြီးနား လယ်ကုန်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ရဲတပ်ရင်း ၃၀ မှာလည်း ပစ်သံခတ်သံတွေ ကြားနေရတယ်လို့ သတင်းတက်လာတယ်။ ကိုစိုးထိုက် (ဖဒို) ဖမ်းစည်းခံရတယ်။ မန္တလေး မြဝတီဘဏ်ကို လက်လုပ်ဗုံးနဲ့ ပစ်ခံရပြီး စစ်ခွေးတစ်ကောင် ဒဏ်ရာရတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ သူတွေကို စစ်သူပုန်တွေက သေဒဏ်ချတယ်။ ဒါကတော့ တော်တော်ကိုများသွားပြီ။ ပြည်သူကို ကြောက်အောင် ခြောက်နေတာ။ သေဒဏ်ပေးလိုက်ရင် ကြောက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ ဗျူဟာပေါ့။ ဟိုနေ့က ပဲခူးမှာ သေဆုံးတာ ၈၀ ကျော်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲ့ နေရာကို medical team တွေ ဝင်ခွင့်ပေးဖို့ UN က စာထုတ်တယ်။ တော်လှန်ရေးစတည်းက ခုထိ သေဆုံးသူ ၇၀၁ ဦးရှိလာပြီ လို့ AAPP ရဲ့ ဒေတာတွေ အရ သိရတယ်။ ကိုဗစ်ထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အာဏာရှင်တွေပေါ့။ လှိုင်သာယာမှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ချို့ပြန်စနေပြီလို့ လည်းကြားရတယ်။ Facebook ပေါ်မှာလည်း fact check မလုပ်ပဲ post တွေ တင်ကြတာ ခုထိ awareness မရကြသေးဘူး။
ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့။ စစ်ရေးမှာတော့ ကချင်နဲ့ ရှမ်းမှာ KIA နဲ့ စစ်သူပုန်နဲ့ တိုက်ပွဲက အများဆုံးပဲ။ ကျောက်မဲတစ်ဝိုက်မှာ RCSS နဲ့ TNLA နဲ့ကလည်း တစ်ချိန်လုံးချနေတာ။ RCSS vs စစ်သူပုန် နဲ့ TNAL vs စစ်သူပုန် ပွဲတွေ ကလည်း ရှိနေသေးတယ်။ RCSS နဲ့ SSPP ကလည်း မတည့်ပြန်ဘူး။ နာမည်မရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်သူပုန်နဲ့ ချတာ အများဆုံးကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာပဲ။ လူသိပ်မသိလိုက်တာက မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ ARSA နဲ့ စစ်သူပုန်နဲ့ မောင်းတောမှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်သွားသေးတာပဲ။ KIA နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ အာလောဘွမ်တောင်ကို စစ်သူပုန်တွေက လေယာဉ်နဲ့ ဆက်တိုက် ဝင်တိုက်တယ်။ စစ်တပ်တွင်းက လူတွေ CDM လုပ်လို့ မရအောင် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အကြပ်ကိုင်ထားတယ်လို့ တပ်တွင်း လူတစ်ချို့က ပြောတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှု့အသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးတယ်။ စုစုပေါင်း ၆ မှု့ ဖြစ်သွားပြီ။ ပဲခူးမှာ စစ်ခွေးတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှု့ကြောင့် ထွက်ပြေးနေရတဲ့ သူ တစ်သိန်းနီးပါးရှိသွားပြီ။ ၅၀၅ နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ သူ ၂၀၀ ကျော်ပြီ။ ( ကျွန်တော် အခု ရောက်နေတဲ့ နေရာက အင်တာနက်မရတဲ့ နေရာဖြစ်နေတာမို့ ဒီရက်ပိုင်း သတင်း တော်တော်များများ လွတ်ကုန်တယ်။)
ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့။ အိမ်မှာဆို အမေတော့ အတာအိုးထိုးပြီး သကြားမင်း ကြိုနေပြီ။
ရန်ကုန်ဟာ အပြင်ပန်းမှာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ရပ်ကွက်ရုံးတွေ မီးလောင်တယ်။ ဟိုနားဗုံးပေါက် ဒီနားဗုံးပေါက်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ တစ်နေ့တည်းနဲ့ ၈ နေရာလောက် ဗုံးကွဲတယ်။ ရပ်ကွက်ရုံး တော်တော်များများ ပြန်မဖွင့်ရဲဘူး။ စစ်သူပုန်တွေ ခန့်ထားတဲ့ ထွေအုပ်တွေဆို အိမ်ပြောင်းပြေးတဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ တစ်ချို့ ထွေအုပ်ရုံး ဆို စစ်ကား ရှိမှ ဖွင့်ရဲတယ်။ ရန်ကုန် နေရာတော်တော်များများမှာ ကားတွေတားပြီးစစ်နေတယ်။ မိန်းလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ စစ်တာ ပိုများတယ်။ သမိုင်းတံတားအဆင်းတို့ မြောက်ဒဂုံ ဘေလီတံတား အဆင်းတို့မှာ စစ်တယ်။ ကားထဲက ခုံတွေ နောက်ဖုံးတွေ လှန်ရှာတယ်။ စစ်ခွေးတွေ က လက်နက် သတင်းရလို့ လိုက်ရှာနေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ စစ်ခွေးတွေ ယုတ်မာတာကတော့ ခဝဲခြံက မျက်မမြင်ကျောင်းမှာ အင်အား ၇၀ လောက်နဲ့ တပ်စွဲထားတာပဲ။ Human shield တောင် မျက်မမြင်တွေကို ရွေး လုပ်တယ်။ တာမွေ အရိုးကုန်က ဗလီဆရာ လူမဆန်အောင် အသတ်ခံလိုက်ရတယ်။ မန္တလေးက မူစလင်တွေ အများဆုံးနေတဲ့ ရပ်ကွက် မီးလောင်ပြီး အိမ်တော်တော်များများ မီးဘေးသင့်သွားတယ်။ KIA နဲ့ အာလောဘွမ်တောင် ဘက်မှာ တိုက်ပွဲတွေက ပြင်းထန်နေတုန်း။ စစ်ခွေးတွေဘက်က အကျအဆုံးများပြီး ပြန်ဆုတ်ခွာတယ် လို့တော့ ပြောတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေလည်း ထောင်ဂဏန်း ရှိလာပြီ။ မုံရွာမှာ တုတ်၊ ဓါး၊ လက်နက်မှန်သမျှ လာအပ်ကြပါဆိုပြီး ရဲကားပေါ်ကနေ လော်စပီကာနဲ့ လိုက်အော်နေတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မြေငှားပြီး ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှု့လုပ်နေတဲ့ India က Adani Group ကို NewYork စတော့အိတ်ချိန်းကနေ ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့က စပြီး ဖယ်ရှားမယ်လို့ သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရှယ်ယာဝယ်ထားတဲ့ သူတွေ ဆုံးရှုံးမှု့တွေ ရှိလာမှာ ဖြစ်သလို ခုလဲ company ရဲ့ ရှယ်ယာဈေးတွေက တစ်ရက်ကို ၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျနေတယ်လို့လည်း သတင်းထဲမှာပါတယ်။ အဲ့ အဖွဲ့ နဲ့ မိအောင်လှိုင်နဲ့ ၂၀၁၉ မှာ တွေ့ပြီး ဆိပ်ကမ်း မြေငှားခအတွက် အမေရီကန် ဒေါ်လာ ၅၂ သန်း ဦးပိုင်ကို ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့အဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက စစ်တပ်က အရာရှိတွေနဲ့ မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသေးတယ်။ ခုတော့ မိအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြီး လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ပုံတွေ video သက်သေတွေ ထပ်ထွက်လာလို့ အရှက်ကွဲပြီ။ youtu.be/8CkuBEhUeqM
မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတယ်။ စီးပွားရေးကလည်း -၁၀ ကို ပြနေတယ်။ ဆက်ပြီး အောက်ကို ဆင်းဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက EAOs တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နယ်မြေတွေ ပြန်သိမ်းမယ် ဆိုပြီး BAP က သတင်းတက်တယ်။ ကျွန်တော်တော့ ယုံရခက်ကြီး ဖြစ်နေတုန်းရှိသေး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ အသံဖိုင် ထွက်လာတယ်။ ယုံကို ယုံရတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ စစ်သူပုန်အဖွဲ့ကို IT Support ပေးဖို့ MCF, MCIA, MCPA စတဲ့ ကွန်ပျူတာ အသင်းအဖွဲ့က လူတွေ တစ်ချို့နဲ့ ကော်မတီတစ်ခု ဖွဲ့လိုက်တယ် ဆိုတာပဲ။ ယူနီကုဒ် ကိစ္စမှာကတည်းက ဒီ အသင်းက လူတွေက ဘာလဲ ဆိုတာ သိခဲ့ ရတာမို့ နည်းနည်းပဲ အံ့သြသွားတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာပဲလားမသိ။ Unicode အရေးမှာ ပါခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက် ကနေ့ ၅၀၅ နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံရတယ်။ သူဆို ဘာပိုစ့်မှ သိပ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် နေတတ်တဲ့ သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူဝရမ်းထုတ်ခံရတာတော့ ထူးဆန်းတယ်။
ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့။ မိုးကုတ်မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာ ၃ ရက်လောက်ရှိပြီ။ မိုးကုတ်မြို့တွင်းက စစ်ခွေးနဲ့ ရဲတွေ ထွက်ပြေးနေပြီလို့ မြို့ခံတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ KIA က တော်တော်ကြမ်းကြမ်းကို ချနေတာပဲ။ အလောဘွမ် ကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ မိုးမောက် အခြေစိုက် ခမရ ၃၂၀ က စစ်အင်အား ၁၀၀ ကျော်နဲ့ စစ်ကြောင်း ၂ ခုနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တာကို စစ်ကြောင်းတစ်ခုက တပ်ရင်းမှုးအပါအဝင် ကျပြီး ဆုတ်ခွာသွားတယ် နောက်တစ်ကြောင်းကလည်း အကျအဆုံးများတယ်လို့ သတင်းရတယ်။ ဗန်းမော်လေဆိပ်မှာ စစ်လေယာဉ်တွေ တောက်လျှောက်ဆင်းပြီး စစ်ခွေးတွေ အင်အား ၈၀၀ ကျော် ဖြည့်တယ် လို့လည်း သတင်းရတယ်။ စစ်ခွေးတွေက စားစရာတောင်မရှိလို့ ငှက်ပျောဖူးတွေပဲ ရှာစားနေရတယ်လို့ ဖမ်းမိတဲ့ စစ်ခွေး တစ်ယောက်က ပြောတာတွေ့ရတယ်။ အာဏာရှင် တစ်သိုက် ရူးသမျှ အငယ်တွေ ခံပေတော့ပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က မိအောင်လှိုင်ကိုသာ ဆဲ နေတာ တကယ်တော့ အာဏာရူးတာ အများကြီးပဲ။ သူတို့ တစ်ဖွဲ့လုံးကို စာရင်းရှင်းရမှာ။ CNN နဲ့ အတူ လိုက်လာတဲ့ Globe က သတင်းထောက်ရဲ့ Allegra Mendelson ရဲ့ သတင်းတက်လာတယ်။ ကိုမြတ်ကျော်သူ က မြန်မာဘာသာပြန် တင်ပေးထားတယ်။ (Link) ဒီခရီးစဉ်က စစ်တပ်က ငှားတဲ့ နိုင်ငံခြား လော်ဘီ Ari Ben-Menashe ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ကို လော်ဘီလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ ထင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်မလာတာ တွေ့ရတော့ လော်ဘီဖိုးတော့ ဆုံးချေပြီတကား လို့ပဲ နှမျောမိတယ်။ ဒီသတင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ စစ်သားတွေကို သတင်းအမှောင်ချပြီး လိုသလို အမိန့်ပေးပြီး ခိုင်းလို့ရအောင် လုပ်ထားတာကို အသားပေးရေးထားတယ်။ KIA နယ်မြေတွေကို လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် စစ်သူပုန်တွေဟာ တရုတ်လေပိုင်နက်ကို အသုံးပြုခဲ့တယ် လို့ KIA က ပြောလာတယ်။ တရုတ်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို သိသိသာသာကြီးကို မြင်နေရတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ထိုင်ဝမ် လေပိုင်နက်ထဲကို တရုတ်ပိုင် နယူးကလိယဗုံးကြဲ တိုက်လေယာဉ် အပါအဝင် လေယာဉ် ၂၅ စီးက နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ပြန်သန်းနေတယ်။ တရုတ်က U.S ကို ထိုင်ဝမ် အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Don`t Play With Fire on Taiwan ဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်။ တစ်ရက် လူ အယောက် ၂၀ ကို ၅၀၅ နဲ့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နေတာက ကနေ့ကျတော့ ဆရာဝန် အယောက် ၂၀ ပါ ပါလာတယ်။ စုစုပေါင်း အယောက် ၄၀ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ လူကယ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေကို လူသတ်သမားတွေက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တော့ ဘယ်လိုတွေတောင် ဇောက်ထိုးဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ထင်သာမြင်သာသွားတာပေါ့။ ဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ ဆရာဝန်တွေကို ဆေးကုသခွင့် ပေးတဲ့ ဆေးရုံ တွေကိုပါ ဆေးရုံ လိုင်စင်ပိတ်မယ် ဆိုပြီး ကြေညာသွားသေးတယ်။ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်လှထွန်းကို မနေ့က ဖမ်းခေါ်သွားတယ် လို့ VOA မှာ ပါလာတယ်။ မိအောင်လှိုင်က လှိုင်သာယာကို ပစ်စတို ခါးကြားထိုးပြီး ဆန်အိတ်တွေ သွားလှူတယ်။ လှူတာကလည်း ယတြာနဲ့ ဗျ။ ဆန်အိတ်ပေါင်း ၃၃၃၃၃ အိတ် ဆိုပဲဗျ။ ရယ်ရတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း လှိုင်သာယာက ဖမ်းမိတဲ့ သူ ၇ ယောက်ကို သေဒဏ်ပေးပစ်တယ်။ Facebook မှာ အမေစုကို ရုံးထုတ်တယ် လက်ထောင်ပြသွားတယ်ဆိုပြီး တက်လာတယ်။ သတင်းက အမှန်၊ ပုံက အမှား။ တပ်ရင်မှုးကျတယ် ဆိုတာကလည်း သတင်းက အမှန်၊ ပုံက အမှား။ ၂၀၁၉ တုန်းက ပုံကြီး။ သတင်းတွေကတော့ အမှန်၊ ပုံတွေက မှားနေတာ။ ဒီအချိန်မှာ သတင်းတင်တာ သေချာစိစစ်ပြီး တင်မှ ဖြစ်မယ်။ သတင်းဖြစ်ပြီးရော ဆိုပြီး တွေ့ရာပုံနဲ့ တွေ့ရာ သတင်း ကောက်တွဲလို့ မဖြစ်ဘူး။ CRPH ရှိတဲ့ နယ်မြေမှာတော့ Federal Army အတွက် ဆိုပြီး သင်တန်းတွေ ပေးနေပြီလို့ သတင်းတွေ ကြားရတယ်။ Covid ကလည်း တစ်ကျော့ပြန် ပြန်ဝင်နေတယ်။ Symptopms အသစ်တွေနဲ့ ဗားရှင်းပြောင်းပြီး ဝင်လာနေတယ်။ လက္ခဏာ အသစ်တွေက မျက်စိနာမယ်၊ အင်ပြင်ထသလို ယားပြီး အဖုအပိန့်တွေ ထ မယ် ၊ ဝမ်းလျောမယ်၊ လက်ချောင်း ခြေချောင်းလေးတွေ အရောင်ပြောင်းလာမယ် တဲ့။
ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့။
၅၀၅ နဲ့ ဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့ အထဲမှာ IT သမားတွေပါ ပါလာပြီ။ တစ်ယောက်တောင်မဟုတ်ဘူး။ တော်တော်များများ ပါလာတာ။ Ubuntu Loco Team က ကိုကိုရဲ လည်းပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေး အပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး Typography ဖန်တီးတဲ့ အကို ငြိမ်းချမ်းအောင် လည်း စာရင်းထဲ ပါလာတယ်။ အဆိုတော် ပိုပို အဖမ်းခံရတယ်။
အားလုံးကို ဒီနေရာကနေပဲ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မုံရွာက ကိုဝေမိုးနိုင် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပြန်အလာ ကားနဲ့ ဝင်တိုက်ပြီး စစ်ခွေးတွေ ဖမ်းသွားတယ်။ ပူတာအို တိုက်ပွဲမှာ မြစ်ကြီးနားက တက်လာတဲ့ ခရီးသည်တစ်ချို့ကို လူသားဒိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီးတော့ စစ်ခွေးတွေက KIA ကို တိုက်တယ်။ ပြဿနာက အဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့က စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတာမှာ တစ်ဖက်က ဘာစည်းမှ မရှိပဲ တိုက်တာပဲ။ KIA နဲ့ နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ တရုတ်နယ်စပ်ဘက်မှာ တရုတ်အစိုးရက သံဆူးကြိုးတွေကာထားပြီး လျှပ်စီးလွှတ်ထားတယ်။ ညဘက်ဆို တရုတ်ဘက်ကနေ Drone တွေ ပျံလာတယ် လို့ KIA အပိုင် စစ်ရှောင်တဲ့ သူတွေ နေတဲ့ Je Yang ကျေးရွာက လူတွေက ပြောတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ငွေစက္ကူတွေကို ဈေးတင်ရောင်းတာ ဝယ်တာ မလုပ်ဖို့ နဲ့ လုပ်ရင် အရေးယူမယ် ဆိုပြီး စာထုတ်တယ်။
လက်ရှိက လက်ထဲငွေပေါ်ချင်ရင် ၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ပေးပြီး ထုတ်နေရတာကိုး။ ငွေစက္ကူပိုရှားလာမယ်။ ငွေစီးဆင်းမှု့ ပိုနှေးသွားမယ်။ အင်တာနက်ပိတ်ထားတော့ အွန်လိုင်းက ငွေကြေးတွေလည်း တိုင်ပတ်နေပြီ။ အရင်လို Kpay လေးနဲ့ scan ဖတ်ပြီး ပေးလို့ မရတော့ဘူး။ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ချင်တာလည်း သူတို့ အပြင် နှစ်ယောက်မရှိဘူး။ နုံလိုက်တာလည်း ချာလို့။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေလည်း ကြားဖြတ်နားထောင်နေတယ် ထင်တယ်။ ဖုန်းခေါ်ရင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံတွေကြားနေရတယ်။ ၁၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ Facebook က ကြေညာချက်ထုတ်တယ်။ လိုတိုရှင်းကတော့ စစ်ဘော မ ရင် ဖျက်မယ် ဘန်းမယ်တဲ့။ ( Link ) ဘားအံ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာ We want democracy ဆိုတဲ့ စာတန်း ချိတ်တယ်။
ပြည်တွင်းစစ်တာထက် တော်လှန်ရေးကာလ (သို့) Failed State ဖြစ်မလား ဆိုပြီးတော့ ဦးသန်းမြင့်ဦး က tweet ထားတယ်။ (P.S- ကျွန်တော်ဒီ တစ်ပါတ် အင်တာနက် မရတဲ့ နေရာရောက်နေလို့ ဘာသတင်းမှ သိပ်မရ ဖြစ်နေပြီး blog လည်း ရေးမရဖြစ်နေတယ်။) CRPH က အစိုးရဖွဲ့ ဖို့ ပြောထားတာ နည်းနည်းတော့ ကြာနေပြီ။ ဧပြီ ပထမအပါတ်ထဲ လို့ ပြောနေရာကနေ သင်္ကြန်တောင် ရောက်နေပြီ။ ခုထိ မထူးခြားသေးဘူး။ ဘာကို စောင့်နေလဲတော့ မသိဘူး။ ခင်ညွန့်လည်း ပျောက်နေတယ်။ သူ့ကို မိအောင်လှိုင်က ခေါ်ထားတယ်လို့လည်း ကြားတယ်။ မြွေပွေးတော့ ခါးပိုက် ပိုက်ပါ့မလားပဲ။ ပြောသာပြောရတာ ခင်ညွန့်က တကယ့် မြွေပွေး၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ တာ နှစ်ယောက်မရှိဘူး။ စစ်သူပုန်တွေက GenZ က ထုတ်သလိုလိုနဲ့ စာအတုတွေ လိုက်ဝေတယ်။ အဲ့စာကြည့်ပြီး GenZ ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိတဲ့ ဟာတွေပဲ ဆိုပြီး ရယ်လိုက်ရသေးတယ်။ တကယ့်ကောင်တွေဗျ။ GenZ ဆိုတာကို အခုထိ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုလို့ ထင်နေကြတာ။
ဧပြီ ၁၆ ရက်နေ့။ ပြောနေတုန်းရှိသေးတယ်။ CRPH က NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ ဖွဲ့တဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ အခုလူတွေအပြင် လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ထပ်ပြီး အင်အားဖြည့်သွားမယ်လို့ ပြောသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေပါတယ်၊ လူလတ်ပိုင်း၊ လူငယ်တွေပါတယ်။ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးက ဦးရည်မွန် (ခေါ်) ကဗျာဆရာ မောင်တင်သစ်။ နောက်ပြီး ဒေါ်ခင်မမမျိုး ဆိုတဲ့ တစ်ယောက် ကိုလည်း နည်းနည်း စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ကျန်တဲ့ သူတွေကတော့ ကြားဖူးပြီးသား လူများတယ်။ လက်နက်ကိုင် EAOsတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တိုက်ရိုက်ပါတာမဟုတ်ပေမယ့် နီးစပ်သူတွေ ပါလာတာကို ထောက်ရင် KNU နဲ့ KIA သေချာပေါက်ပါမယ် ဆိုတာ ပြောလို့ရတယ်။ CNF ကတော့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်တိုင် ပါလာတယ်။ ထူးခြားတာက အစိုးရအဖွဲ့မှာ ရှမ်းနဲ့ ရခိုင်မပါဘူး။ ရခိုင် AA စစ်ဦးစီးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်က Twitter မှာ သူ့ကို CRPH က လက်တွဲ့ဖို့ခေါ်ပါတယ်၊ သူ့မှာ သူ့လမ်းစဉ်ရှိပြီးသားမို့ ငြင်းလိုက်တာပါ ဆိုပြီး tweet ထားတယ်။ TNLA အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ် ဘုန်းကျော် ကတော့ အစိုးရအဖွဲ့မှာ တိုက်ရိုက်မပါဝင်နိုင်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကနေ ပူးပေါင်းပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်သွားမယ် လို့ စာထုတ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားဝင်မှု့ ရဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒါကလည်း အနှေးနဲ့ အမြန်ဖြစ်လာမှာပဲ။ စစ်သူပုန်တွေရဲ့ ရာဇဝတ်မှု့တွေကို စုံစမ်းဖို့ လန်ဒန် အခြေစိုက် ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ Volterra Fietta ကို CRPH က ငှားလိုက်တယ်။(Link) ည ၇ နာရီလောက် ဆွမ်ပရာဘွမ်-မြစ်ကြီးနား လမ်းမှာ KIA နဲ့ စစ်ခွေးတွေ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ စစ်ခွေး ၅ ကောင်ကျတယ်။ အပစ်ရပ်မယ်ဆိုပြီး ကြေညာထားတဲ့ စစ်သူပုန်တွေက KIA နယ်မြေတွေကို စစ်အင်အားနဲ့ ရိက္ခာဖြည့်နေတယ်။ မနေ့ညက မြင်းခြံမှာ ပြည်သူနဲ့ စစ်ခွေးတွေနဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ကြခတ်ကြတာ ပြည်သူ ၂ ယောက်ကျဆုံးသွားတယ်။ မနေ့က မုံရွာက ကိုဝေမိုးနိုင်ကို ကားနဲ့တိုက်ပြီး ဖမ်းခဲ့တာမှာ တိုက်ခဲ့တဲ့ ကားကို ကနီမြို့နယ် ယာကြီးရွာမှာ ပြည်သူတွေက ဖမ်းမိတယ်။ ကားပေါ်မှာ စစ်ခွေး လင်မယား နဲ့ လက်နက် အပြည့်အစုံ မိတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ စစ်ခွေးလင်မယားက စစ်ခွေးတွေက ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လာတောင်းရင်း ပြည်သူနဲ့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့။ ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့ နိုင်ငံ အနှံ့ရှိနေတုန်းပဲ။
မိုးကုတ်က ဆန္ဒပြပွဲကို စစ်ခွေးတွေ ဝင်ပစ်တာ ၂ ယောက်ကျပြီး တစ်ယောက် အဖမ်းခံရတယ်။ သရုပ်ဆောင် ခီ လင်မယားကို လေဆိပ်မှာ လာဖမ်းပြီး နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ချလိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ဆိုတော့ တစ်ချို့လူတွေကို ထောင် ကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့ လွှတ်ပေးတယ်။ ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့က လူတွေလည်း လွတ်တဲ့ အထဲပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား စစ်သူပုန်လေတပ်စခန်းကို KIA က လက်နက်ကြီးနဲ့ ၂ ခါ ပစ်တယ်။ မိုးညှင်းမြို့နယ်က ကာဒူဘူတာနဲ့ မော်ဟန်ရထားဘူတာ ကြားမှာရှိတဲ့ နံပါတ် ၅၅၅ ရထားတံထား ဗုံးခွဲခံရပြီး ပျက်ဆီးသွားတယ်။ မိုးမောက်မြို့က တပ်မ ၃၂၀ ကိုလည်း KIA က လာပစ်လို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတယ်။ The Insights က ဒေတာတွေ အရ အာဏာစသိမ်းကတည်း ကနေ့အထိ စစ်သူပုန်နဲ့ EAOs တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေက တိုက်ပွဲပေါင်း ၄၀ ရှိပြီး စစ်သူပုန်ဘက်က သေဆုံး ၂၀၀ နဲ့ အထက် ဒဏ်ရာရသူ ၂၅ နဲ့ ဖမ်းဆီးခံ ၃၁ နဲ့ အထက်လို့ ဆိုတယ်။ ရှမ်းမြောက်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ နေရာထိုင်ခင်းမလောက်လို့ ထော်လာဂျီပေါ် အိပ်နေရတယ်လို့ သတင်းတက်လာတယ်။ ဒီသတင်းတွေ တက်လာလေ ပြည်မကြီးကိုပါ စစ်မြေပြင်ဖြစ်စေချင်လေပဲ။ ပြည်မက လူတွေက သူများလာတိုက်တာကိုပဲ စောင့်နေကြတုံး။
မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့က “ဝ” ၃၂ နှစ်ပြည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပို့တယ်။ မြောက်သုံးကောင်က ဝ ကို အားကျ အတုယူနေတာပဲ။ ရန်ကုန် စမ်းချောင်း၊ ရန်ကင်းနဲ့ မြောက်ဒဂုံ ထွေအုပ်ရုံးတွေ ဗုံးခွဲခံရတယ်။ KBZ Bank က ဝန်ထမ်းတွေ ရုံးပြန်တက်ဖို့ ဖိအားတွေ ပေးနေတယ်။ CDM တွေ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲ မသိ။ ၂၄ ရက်နေ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ လုပ်မယ့် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး မှာ လူချင်းတွေ့ဆုံဖို့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိတ်ထားတယ်။ CRPH ဘက်က လူကိုလည်း ဖိတ်ထားတယ်လို့ သတင်းကြားရတယ်။ အာဆီယံက ကြားက ဝင်ညှိပေးတဲ့ အာဆီယံ ဝေး သဘောပေါ့ဗျာ။ ဒါပြီးရင်တော့ diplomatic way ကုန်ပြီ လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။ စစ်ခွေးတွေက dialouge သမားတွေ မှ မဟုတ်တာ။
ဧပြီ ၁၈ ရက်နေ့။ Facebook Audience Insight က ဒေတာတွေ အရ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ ၁၀ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ပဲ အင်တာနက်သုံးနိုင်တော့တယ်။ Mobile internet ပြန် မဖွင့်မချင်း၊ Facebook ကို ပိတ်ထားတာ ပြန်မဖွင့်မချင်း Digital marketing သမားတွေက သေပြီပဲ။ တက္ကသိုလ်က ဆရာ ဆရာမတွေကို မရမက အနုနည်းနဲ့ ပြန်ခေါ်နေတယ်။ ကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ ပြန်လုပ်နေတယ်။ KBZ အပြင် Aya Bank ကလည်း ဝန်ထမ်းတွေကို ဖိအားပေးပြီး ပြန်ခေါ်နေပြီ။ CDM က ဒီပွဲမှာ အသက်ပဲ။ CDM က ဆက်ပြီး တောင့်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ရန်ကင်းမှာ ဖမ်းမိတဲ့ ကလေးတွေကို နှိပ်စက်ထားတာ ရစရာ ကိုမရှိဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှု့တွေ ပိုများလာတယ်။ Japan က ဟိုတခါ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက် Yuki Kitazumi ကနေ့ ရေကျော်အိမ်အထိ စစ်ခွေးတွေ လာဝိုင်းပြီး ပြန်ဖမ်းသွားတယ်။ Mobile internet တွေ ပိတ်ထားတဲ့ အပြင် Singapore server တွေကိုပါ ပိတ်ထားတယ် လို့ သိရတယ်။ မြင်းခြံမှာ တနေကုန် ပစ်ခတ်မှု့တွေ ရှိနေတယ်။ ပြည်သူတွေက တူမီးနဲ့ ပြန်ပစ်နေပြီလို့ သတင်းရပြီး photo မရိုက်ပဲ ဒီတိုင်း ပြန်ချနေတယ် ဆိုတာ ယုံတယ်။ ဘုရားလမ်းထိပ်က KBZ mini bank ဗုံးကွဲတယ်။ အမှတ် ၅၊ အမှတ် ၆ မှာ ညဘက်အထိ ပစ်နေတုန်းပဲ။ KIA ဘက်မှာ ဗျူဟာမှူးကို အရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့ ပြောတယ်။ KIA တပ်မဟာ ၈ ကို စစ်သူပုန်တွေက လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်တယ်။ ထိုင်းဘက်ကနေ မြန်မာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ချို့ကို မြဝတီဘက်ကနေ တင်သွင်းခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်။ Super coffee mix အုပ်စုရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေလို့ သိရတယ်။
ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့။ မြင်းခြံမှာတော့ တော်တော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီ။ ပျောက်ကြားပြန်ချနေပြီလို့ သိရတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း အဲ့လို ပြန်ချစေချင်တာ။ စစ်ခွေးတွေ ၆ ကောင်သေ ၁၃ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ စစ်သူပုန်တွေက india နယ်စပ်က ကသည်းသူပုန်တွေဖြစ်တဲ့ PLA နဲ့ UNLF ကို သုံးပြီးတော့ ဆန္ဒပြတဲ့ သူတွေကို နှိမ်နင်းခဲ့တယ်လို့ india ဘက်က ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ တစ်ယောက်က ပြောလာတယ်။ ကသည်းသူပုန်တွေကို နယ်စပ်က ခေါ်သွင်းလာ မြန်မာစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီး အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ အစည်းအဝေးကို မိအောင်လှိုင်တက်မယ်လို့ ထိုင်းက သတင်းထုတ်လိုက်တော့ Global R2P director က မိအောင်လှိုင် မြန်မာပြည်ကထွက်လာရင် ဖမ်းသင့်တယ်လို့ twitter မှာ tweet လိုက်တာကြောင့်မိအောင်လှိုင်က Video conferencing နဲ့ပဲ တက်တော့မယ်လို့ ဆိုတယ်။ သာကေတက ထွေအုပ်ရုံးမီးလောင်တယ်။ KNU တပ်မဟာ ၈ ကို စစ်သူပုန်တွေက လေယာဉ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တယ်။ No Fly Zone မထုတ်ပြန်သ၍ကတော့ လေတပ်ကို သုံးနေဦးမှာပဲ။ ထုတ်လည်း သုံးရင် သုံးနေဦးမှာပါပဲ။ ဘယ်လိုနေနေ ညစ်နေတဲ့ ကောင်တွေလေ။ ကော့သောင်းခရိုင်တွင်း တပ်နယ်မြေက အရာရှိ ၂ ယောက် တပ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ သတင်းရတယ်။ တခြားအဆင့် အောက်ခြေက စစ်သည်တွေလည်း တပ်ကထွက်ပြေးလာတာ တော်တော်များလာပြီ လို့လည်း သိရတယ်။ ဒီသတင်းတွေကတော့ စစ်သူပုန်တွေက ဖွက်ထားမှာပဲ။
ဧပြီ ၂၀ ရက်နေ့။ ရန်ကုန် ခဝဲခြံ မျက်မမြင်ကျောင်းမှာ တပ်စွဲထားတဲ့ တပ်မ ၇၇ က စစ်ခွေးတွေ ညနေ ၃ နာရီခွဲမှာ အပြီးထွက်သွားကြတယ်။ KIA ကို လေကြောင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် လေကြောင်းကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ တစ်ယောက်မှ မရှိသေးဘူးလို့ သိရတယ်။ ဝိုင်းမော်မှာ ရှိတဲ့ ခမရ ၃၈၉ ကို KIA က သိမ်းလိုက်တယ်။ ဖားကန့် မှာလည်း တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်။ NCA ကို စတင်ချိုးဖောက်တာ စစ်သူပုန်တွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ KNU က ပြန်ရှင်းတယ်။ NUG ကို စစ်သူပုန်တွေက တရားမဝင်အသင်းအဖြစ်ကြေညာတယ်။ ကုလ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟောင်း ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာကို လာဖို့ကြိုးစားပေမယ့် visa မရပဲ အငြင်းခံလိုက်ရတယ်။ ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းက ယင်းမာပင် မှာ ပြည်သူနဲ့ စစ်ခွေးတွေ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေတယ်။ မြင်းခြံမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတယ်။ ပြည်သူဘက်က သေနတ်နဲ့ ပြန်ပစ် ဗုံးနဲ့ ပြန်ထုနေပြီ။ စကားမစပ် မြင်းခြံရဲ့ ခံတပ်က ကျွန်တော့်အိမ်နားမှာဗျ။
ဧပြီ ၂၁ ရက်နေ့။ ကနေ့ကတော့ Blue Strike တဲ့။ ဖားကန့်မှာ KIA က စစ်ခွေးစခန်း တစ်ခုကို သိမ်းလိုက်တယ်။ တပ်တွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ် ရာပြည့် အပါအဝင် ၁၁ ဦး ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ သတင်းတွေ တက်လာတယ်။ တပ်တွင်းသတင်းဆိုတော့ လိုက်မရ ပြုမရနဲ့ သတင်းအတည်ပြုလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဇော်မဲလုံးကတော့ မိအောင်လှိုင် အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲ တက်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု့ကတော့ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြောသွားတယ်။ သူက သတင်းမထုတ်ရသေးဘူး၊ ဂျာကာတာကို မိအောင်လှိုင်သွားမယ့် လေယာဉ် crew list က အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နေပြီ။ ကုလ မြန်မာနိုင်ငံရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် က ၂၄ ရက်နေ့ meeting မတိုင်ခင် ဂျာကာတာကို အရောက်သွားမယ်လို့ သိရတယ်။ CDM လုပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ညီသုတ က CDM လုပ်ချင်တဲ့ တပ်ထဲက လူတွေ သူ့ကို ဆက်သွယ်လို့ ရပါတယ်လို့ သူ့ Facebook account မှာ တင်ထားတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာ တကယ်တော့ တော်တော်လေးကို အန္တရာယ်များပါတယ်။ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးနေရတဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို ယုံရမလဲ ဆိုတာ တော်တော် စဉ်းစားစရာပါ။ ရေတပ်က ဗိုလ်တစ်ယောက်လည်း CDM လုပ်သွားတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ လှိုင်သာယာအပါအဝင် တစ်ချို့ တပ်စွဲထားတဲ့ နေရာတွေကနေ စစ်ခွေးတွေ ပြန်ထွက်သွားပြီလို့ သိရတယ်။ ရဲ နဲ့ စစ်ခွေးတွေ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်းသွားလာနေတဲ့ ကားတွေကိုတော့ စစ်နေတုန်းပဲ။ စစ်နေတဲ့ ကြားကပဲ စစ်သူပုန် အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းညွန့် အိမ် ဗုံးကွဲတယ်။ မုံရွာ က ဖမ်းထားတဲ့ ကိုဝေမိုးနိုင်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ အပြင် ၄၀၂ နဲ့ပါ တရားစွဲထားတယ်။ EU က NUG နဲ့ သံတမန်ရေး အဆက်အသွယ် လုပ်တယ်လို့ သိရတယ်။
ဧပြီ ၂၂ ရက်နေ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်တာနက် မရလို့ ရုံးချိန်း cancel ဖြစ်သွားပြီး မေ ၆ ရက်နေ့ ကို ရွေ့လိုက်တယ်။ CDM လုပ်တဲ့ မီးရထားဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ထုတ်တဲ့ စာ ထွက်လာတယ်။ အာဆီယံထိပ်သီးပွဲကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က မသွားတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။ NUG ကနေ INTERPOL အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးဆီကို အာဆီယံ အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့ အချိန်မှာ ဖမ်းပေးဖို့ စာပို့တယ်။ မလေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ကတော့ အာဆီယံအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ Failed state ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဗဟိုဘဏ်က ဒေါ်လာ ၆ သန်း ထုတ်ရောင်းတယ်။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု့က တော်တော် အခြေအနေဆိုးနေပြီ။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှု့ပုံမှန်ဖြစ်အောင်လို့ ဆိုပြီး ဘဏ်တွေ ကို ဖိအားပေးပြီး ဖွင့်ခိုင်းတယ်။ အင်တာနက်ကို ဖြတ်ထားတယ်။ ဘယ်လို transition လုပ်ရမလဲ။ Fax ခေတ်မှ မဟုတ်တော့တာ။ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကနေ တောင်သူတွေကို ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ခိုင်းနေပြီ။ NUG အနေနဲ့ De Facto ဖြစ်ဖို့ လိုနေပြီ။ De Facto လုပ်ဖို့ လမ်းကြောင်းပေါ်လည်း ရောက်နေမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။ စစ်သူပုန်တွေဘက်က ခုအချိန်မှာ အကွက် အသစ်တွေ ထုတ်နေပြီလို့ ထင်တယ်။ သူတို့ ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာ ခန့်မှန်းရ ခက်နေပြီ။ CRPH အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့တွေကို ဝရမ်း ချိတ်ပိတ်ပြီး သိမ်းဖို့ တရားရုံးက အမိန့်ထုတ်တယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှု့တွေ ပါ ရှိနေပါတယ်လို့ RFA က ပြောသွားတယ်။
ဇာဏ်ခီ တို့ လင်မယားကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချထားတယ်လို့ MRTV က သတင်းထုတ်တယ်။ KIA ဘက်ကို ဖိဖို့ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော် ထပ်ပို့ထားတယ်။ KNU နယ်မြေမှာတော့ CDM လုပ်တဲ့ ရဲ စစ်သား ၂၀၀၀ နီးနီးရှိနေပြီလို့လည်း သတင်းရတယ်။ ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းက စပြီ။ India မှာ တော်တော် ဆိုးနေပြီ။ လာအိုနိုင်ငံ မြို့တော် ဗီယန်တိုင်းကို LOCK DOWN ချလိုက်တယ်။ လာအို ဘက်က ကူးစက်မှု့တွေက ထိုင်းဘက်က လာတာလို့ ယူဆကြတယ်။ မြန်မာမှာလည်း ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်ကို တွေ့တယ်လို့ သတင်းတွေ့လိုက်တယ်။
ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့။ ကနေ့ ရန်ကုန်မှာ သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေ ပြန်ထွက်တယ်။ တခြားမြို့တွေမှာလည်း ပြန်ထွက်ကြတယ်။ မြို့ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ စစ်ခွေးအင်အားတော်တော်နည်းနေပြီ ဆိုတာ သိသာလွန်းတယ်။
ကျိုက်ထိုနဲ့ ဘီးလင်းမှာ NUG ထောက်ခံပွဲလုပ်တယ်။ အဲ့ပွဲကို စစ်ခွေးတွေက လာဖျက်တယ်။ KNU နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး ပစ်ကျခတ်ကြဖြစ်ပြီး စစ်ခွေးတွေ သေတယ် ကြားတယ်။ ဒီကြားထဲ ကျားဖြူပါတီက ထုတ်တဲ့ စာကိုလည်းကြည့်ဦး။ ဘောမနေတာ မရှက်ကြဘူးလားမသိ။
မနက်ဖြန် မနက် ၆ နာရီမှာ မိအောင်လှိုင် အာဆီယံ မီတင် သွားမယ်။ အာဆီယံက တော့ ဘာမှ မျှော်လင့်လို့ မရဘူး ဆိုတာ လူတိုင်း လက်ခံထားကြတယ်။ ကျွန်တော် စာရေးတဲ့ အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဘက်ကိုပဲ ရေးတယ်။ ခုက စပြီး မကောင်းတာတွေပါ ထည့်ရေးရတော့မယ် ထင်တယ်။ ဆရာဝန် အကြီးပိုင်း တချို့ CDM နေရာကနေ ခံဝန်ထိုးပြီး အလုပ်ပြန်ဝင်နေကြပြီ။ ပညာတတ် လူယုတ်မာ အတ္တသမားတွေမှ အများကြီးပဲ။ မနေ့က အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ မီးရထားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဘာမှကို မဆိုင်တော့တာ။ တကယ်တော့ စွန့်လွတ်ရဲသူ ဆိုတာ ဘာမှ မရှိလေ ပိုပြီး စွန့်လွတ်နိုင်လေဆိုတာ သင်ခန်းစာ ရသွားတာပေါ့။ ဘာ့ကြောင့် တချို့လူတွေ minimalism နေတယ် ဆိုတာလည်း ခုတော့ ရေးရေးလေး သဘောပေါက်လာပြီ။
ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့။ ကနေ့ ပေါက်သွားတာက Myanmar NET ရဲ့ infranet flyer ပဲ။
အဲ့တာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ mobile phone internet ကနေ banking app တွေ အကုန် အလုပ်လုပ်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းပဲ။ စစ်သူပုန်တွေက လူထုကို အင်တာနက် ပိတ်ပင်နေတာ ပိုဆိုးသွားတဲ့ level တခုရောက်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒီလို infranet လုပ်တဲ့ နေရာမှာ စစ်သူပုန်တွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် စဖြစ်တဲ့ feb ကတည်းက လုပ်နေမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ စစ်သူပုန်တွေကို အခါတော်ပေးနေတဲ့ ပညာရှင်များအသင်းကြီး ရှိနေလို့ ဒီဟာကြီးက ပေါ်လာရတာ ဆိုတာ အသိသာကြီး။ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ အတူ တိုက်ဖျက်ရမယ့်အထဲမှာ အသားထဲက လောက်ထွက်တဲ့ DO NOT FORGET MG THAR PHYO တွေလည်းပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေ အကြီးပိုင်းတချို့ CDM က ထွက်ပြီး အလုပ်ပြန်ဝင်ကြတဲ့ အပေါ် သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ကို မေးကြည့်တော့ အဲ့ လူတွေက အစက Social Punishment ကို ကြောက်လို့ auto CDM လုပ်တာ၊ တကယ်လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောတယ်။ အလုပ်ပြန်ဝင်တဲ့ ဆရာဝန်တချို့က စစ်သူပုန်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ရာ ပတ်သတ်ကြောင်း မကင်းရာ မကင်းကြောင်းတွေ များတယ်။
MDY _ PLO လမ်းမှာ သွားတဲ့ ကားတွေကို တား စစ်ပြီး စစ်ခွေးတွေက လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေသတဲ့။ ဝေတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်ကိုလည်းကြည့်လိုက်ဦး။ ဗြောင်လိမ် ဗြောင်စား ဆိုတာ သူတို့မှ အစစ်။
စကားမစပ် ၁၉၈၈ တုန်းက အင်တာဗျူး တစ်ခုကို တွေ့လို့ ကြည့်မိလိုက်တယ်။ အဲ့တုန်းက ခုလို အင်တာနက် မရှိ သတင်းမီဒီယာ စီးဆင်းမှု့ မရှိနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပြီး လိမ်လို့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
ကနေ့ အားလုံးစောင့်နေတဲ့ အာဆီယံမီတင်က ဘာထူးလဲ ဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ အာဆီယံက အချက် ၅ ချက် တောင်းဆိုလိုက်တယ်တဲ့။
Here is the ASEAN ‘Five Points of Consensus’. We will have to wait to see whether the Tatmadaw implements any of these broad commitments, and how ASEAN responds to any Tatmadaw delays or failures to meet them. pic.twitter.com/sjzTQmniOz
— Aaron Connelly (@ConnellyAL) April 24, 2021
အစကတည်းက အာဆီယံ မီတင်ကို ဘာမှ မျှော်လင့်မထားတာ။ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်ကြရမှာပဲ။ အာဆီယံက မီတင်လုပ်တယ်ဆိုတာ UN က ပြောလွန်းလို့ မနေသာလို့ လုပ်တယ် အမည်ခံပြီး လုပ်တာပဲ ရှိတာ။ ထွက်လာတဲ့ outcome တွေက အားရစရာ တစ်ခုမှ မရှိဘူးလေ။ အာဆီယံ Consensus = သဘောတူညီချက်လို့ပဲ ရှိတာ။ မိအောင်လှိုင်က သဘောတူပါတယ် လို့ ပြောမှ မသွားတာ။ ပြီးတော့ အချိန် အကန့်အသတ်မပါဘူး။ အချက်အကုန်လုံး အချိန်ဆွဲတာပဲ ဆိုတာ သိနေပြီးသား။ ဒီကြားထဲ ဒေါက်တာဆာဆာတစ်ယောက်ကလည်း ဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကပဲ အားမရတာလား မသိဘူး။ NUG အနေနဲ့ စစ်တပ် ကို အမြန်ဆုံးဖွဲ့သင့်နေပြီ။ စစ်တပ်က အရာရှိတွေ KNU ဘက်ခိုလှုံတာ သတင်း တင်ကြပေမယ့် နောက်ထပ် KNU ဘက်ထွက်လာမယ့် သူတွေ အတွက် လမ်းကြောင်းနည်းသွား ပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်တယ်။ တပ်ထဲမှာလည်း စစ်သားတွေ ဗိုလ် အငယ်တွေကို အတော် ချော့ပြီး ထိန်းထားတယ်။ UMFCCI က ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ပြန်တက်ဖို့ ဖိအားတွေ ပေးနေတယ်လို့ သတင်းကြားတယ်။ သွေးအေးမသွားဘူး ဆိုပေမယ့် အချိန်က စကားပြောနေပြီ။ NUG အနေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာ မြန်မြန်မလုပ်ရင် အသာစီးရနေတဲ့ ဘက်က နိုင်သွားတော့မယ်။ ဧည့်စာရင်းတွေလည်း စစ်နေပြီ။ အဲ့တာကိုက ရှုံးဖို့ လမ်းစပဲ။ သူတို့ လုပ်ချင်တာ ပေးပြီး လုပ်ခိုင်းတဲ့ သဘော။
ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့။ NUG က ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ ခုထိ မဖွဲသေးဘူး။ မဖွဲတော့ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ EAO တွေကို လက်နက် ဝယ်ပေး ဆိုတော့လည်း ဝယ်ပေးတာမတွေ့ဘူး။ လက်နက် ဆိုတာ EAO တွေမှာ လက်နက်ကြီး နဲ့ လေကြောင်း တိုက်စစ်ကို ပြန်တိုက်ဖို့ လက်နက်မရှိဘူး။ အဲ့တာတွေ ရှိမှ EAO တွေက စစ်တိုက်လို့ ရမှာ။ မဟုတ်ရင် လက်နက်ချင်း level မတူပဲ တိုက်လို့မရဘူး။ NUG အနေနဲ့ စစ်ကို ရှောင်လွှဲလို့ မရမှ တိုက်မှာ ဆိုပေမယ့် အချိန်နှောင်းသွားနိုင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း မမေ့သင့်ဘူးထင်တာပဲ။ NUG ရဲ့ အနောက်မျှော်လမ်းစဉ်က တော်သင့်ပြီလို့ ထင်တယ်။ အစကတည်းက ပြည်သူ့ကိုပဲ ဦးတည်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးက ပြည်တွင်းအားကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့ သိမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ ပြည်ပအားကို သုံးရင် ပြည်တွင်း အထိနာတာ သက်သာမယ်ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပေမယ့် အချိန်နဲ့ လူသေစာရင်း က တဖြည်းဖြည်း ရှေ့တိုးနေတယ်။ မနေ့က အာဆီယံ အစည်းအဝေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် ကို VOA က အင်တာဗျူးတာကို နားထောင်ပြီး နားလည်လိုက်တာက NUG ရဲ့ statement ကို တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးမှာ မိအောင်လှိုင် ရှေ့မှာ ဖတ်ပြသွားတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဆီကို NUG က ပေးချင်တဲ့ message ကိုလည်း အင်ဒိုက ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကလည်း အာဆီယံဆီက ဘာမှ မ မျှော်လင့်ဘူး။ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်သွားမှာပဲလို့ ပြောတယ်။ အဲ့တာတွေဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာဆာဆာ က စာထုတ်တယ်။ တကယ်ဆို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကပဲ စာထုတ်ရမှာကို protocol မသိပဲ သူက အရင်ထုတ်လိုက်တယ် ထင်တယ်။
နောက်လ ၅ ရက်နေ့ ဆိုရင် ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်မယ် လို့ စစ်သူပုန်တွေက ကြေညာထားတယ်။ လှိုင်သာယာနဲ့ မြောက်ဒဂုံမှာ မီတာခတွေ လာဆောင်ဖို့ စာတွေ ထုတ်လာတယ်။ ကနေ့ဆိုရင် သန်လျင်ပိုစ့်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်း မတူးတူးသာနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အဖမ်းခံရတယ်။ မနေ့ကတော့ အာဆီယံမှာ ဘလာဘလာ နဲ့ အခု စစ်ခွေးတွေက ဒုံရင်း ဒုံရင်းပဲ။ NUG အနေနဲ့ စစ်သူပုန်တွေ အကွက် အရင်ရွေ့တာကို ဘာလို့ ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတာလဲ မသိ။ တကယ်ဆို ကိုယ်ကစပြီး အကွက် ရွေ့ရမှာ။ အချိန်က ကိုယ့်ဘက်မှာ မရှိတာကို သိသင့်နေပြီ။ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ စစ်သူပုန်တွေကို soutshetless tatmadaw ဆိုပြီး သုံးနှုံးလာတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့က ကိုယ်တွေထက် ဝေါဟာရ ပိုကြွယ်နေသေးတယ်။ ပစ်တာခတ်တာတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ဆန္ဒပြတာတွေကတော့ နိုင်ငံအနှံ့ရှိနေဆဲပဲ။ ထူးခြားတာ က ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် အမေရိကန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က သွားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပဲ။ သတင်းဆိုပေမယ့် ကောလဟာလ လို ဖြစ်နေတယ်။ စစ်ရေး နိုင်ငံရေးအတွက် သွားတာလို့ပဲ ထင်တယ်။ အလောဘွမ်စခန်းကို စစ်သူပုန်တွေ ထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်း အသေအလဲပဲ။ နောက်သတင်းတစ်ခုက စစ်သူပုန်တွေ ကိုယ့်တပ်ကို လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကြဲ တယ် ဆိုတာပဲ။ အမေရိကန်ကလည်း ထိုင်းနဲ့ မဟာမိတ်ပြန်ဖွဲ့တယ် ကြားတယ်။ ဆိုတော့ မြောက်ဘက် အခြမ်းကြီး က တစ်ခုခုထူးခြားမယ်လို့တော့ တွေးမိတယ်။
ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့။ လှိုင်သာယာမှာ တချို့စက်ရုံတွေ တလစာ လျော်ကြေးပေးပြီး ပိတ်တဲ့ စက်ရုံပိတ်ကုန်ပြီ။ တလထက် ပိုကြာအောင် ပိတ်ချင်လည်းပိတ်မယ် ပြောတယ်။ အခုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ စက်ရုံတွေကလည်း ကုန်ကြမ်းတွေ ကုန်အောင်ဖွင့်နေတာ။ ကုန်တာနဲ့ ပိတ်မယ့် စက်ရုံတွေ အများကြီးပဲ။ အလုပ်ဆင်းရတဲ့ စက်ရုံတွေ နောက်လကစပြီး အခြေခံလစာ ၄၈၀၀ အစား ၃၆၀၀ ပဲ ပေးတော့မယ်လို့ လှိုင်သာယာက ဘော်ဒါတယောက်က ပြောတယ်။ လာမယ့် ၃ လ နဲ့ ၆ လ အတွင်းမှာ လူ ၃.၄ သန်းနဲ့ အထက် စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲ မယ်လို့လည်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ က ပြောထားတယ်။
ချင်းပြည်နယ်မှာ စစ်သူပုန်တွေနဲ့ မင်းတပ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲ အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်။ စစ်ခွေးတွေဘက်က ဗုံးသီး လောင်ချာတွေ သုံးပြီး ချပေမယ့် ဒီဘက်က တူးမီး တစ်လုံးထိုး နှစ်လုံးထိုးလေးတွေနဲ့ ပဲ ပြန်ပစ်နေကြရတာ တောင် စစ်ခွေးတွေ အသေအလဲ တိုက်နေရတယ်။
မိုဘိုင်းအင်တာနက်တွေ ပိတ်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် Operator တွေက Security Pen Test မလုပ်နိုင်လို့ပဲလား တော့ မသိဘူး။ တစ်ချို့ VPN တွေနဲ့ သုံးလို့ရနေတယ်။ သုံးလို့ ရနေတာကိုလည်း ဒီအတိုင်း ခိုးသုံးကြရင် ရနေတာကို facebook, twitter ပေါ်မှာ တက်ရေးပြီး နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်ကိုပါ သွားပြောတဲ့ သူတွေက ရှိနေသေးတော့ ဒီလူတွေနဲ့ ဒီ လှေနဲ့ လို့ပဲ တွေးမိတယ်။ အင်တာနက်တွေ ပိတ်ထားပေမယ့် Cloud services တွေ မှာ Azure တွေ MS Service တွေကျ ရနေပြီး AWS တွေ Google Compute တွေကျ မရဘူးတဲ့ဗျ။ ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ပိတ်နေလဲ ဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်တယ်။
NUG မှာ အဖွဲ့ဝင်အသစ် ၃ယောက် ထပ်တိုးတယ်။ CDM ကရော ဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်မလဲ။ CRPH ကရော CDM ကို ဘယ်လောက်ထိ support လုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဖြစ်သင့်တာတော့ မြို့နယ်အလိုက် CDM ကို support လုပ်တာက ပိုပြီး ထိရောက်မယ်လို့ မြင်တယ်။
" ကျွန်တော်တို့ မရှုံးသေးပါဘူး။ မကြာခင်နိုင်မှာလား အတော်ကြာမှ နိုင်မှာလားပဲ ရှိတာပါ။ ဘာလို့ ဒီလောက်သေချာနေရတာလဲလို့မေးရင် အဖြေကရှိပါတယ်။ ငါတို့ဆက်ပြီး တော်လှန်နေတယ်။ လက်မလျှော့ဘူး။ ငါတို့နိုင်မယ်လို့ အဖြေထွက်ပြီးသားပွဲမှာ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်နေသမျှ အောင်လံလွှင့်ရမယ့် ရက်ကို တဖြည်းဖြည်း ပိုနီးလာမှာပံ။ အဲ့တော့ ထိုင်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျမနေပါနဲ့။ လုပ်လို့ရတာ ဝင်လုပ်ပါ။ တစ်ယောက်ရဲ့ အား ပိုပါလာရင် ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ အရှိန်ပိုကောင်းလာမှာပါ။ မြန်မြန်ရောက်မှာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲလို့ ဗန်းမော်တင်အောင် ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ် သမိုင်းတာဝန်ရောက်နေတုန်း ကျရာနေရာကနေ ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ကြပါ။ "
ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့။ KNU ဘက်က စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေ လုပ်နေပြီ။ KNU, KIA က သူတို့ နယ်မြေသူတို့ အပိုင်ရအောင် ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ယူပြီး တိုက်နေတော့ သူတို့နယ်မြေတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေတယ်။ အာဆီယံ အစည်းအဝေးက အချက် ၅ ချက်အပါအဝင် အထူးကိုယ်စားလှယ် လာဖို့ကို တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်မှ သဘောတူနိုင်မယ်လို့ မိအောင်လှိုင်က ကြေညာတယ်။ မင်းတပ်မှာ တူမီးနဲ့ ပြန်တိုက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ခဏ အပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ မြို့မိမြို့ဖ တွေကို လာ ညှိတယ်။ ဒီကောင်တွေက ဆိုလိုချင်တာ အဲ့တာပဲဗျ။ Dialogue သမားတွေမှ မဟုတ်တာ။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ သူကိုပဲ သူတို့က စကားပြောတော့မှာ။ ကိုယ့်မှာ လက်နက် မရှိလို့ကတော့ ဒီကောင်တွေကို စကားပြောဖို့ မကြိုးစားလေနဲ့ပဲ။ မင်းတပ်မှာ က ပြည်သူဘက်က ဖမ်းမိတဲ့ စစ်ခွေးတွေထဲမှာ ဗျူဟာမှုးပါ သွားလို့ ညှိရတယ်လို့လည်း ကြားတယ်။ တူးမီးကိုတောင် မနိုင်တာ။ တစ်နိုင်ငံလုံး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်လို့ကတော့ ဒီကောင်တွေ ဘယ်နလမှ ခံမှာ မဟုတ်ဘူးပဲ။ ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ စစ်ခွေးတွေနဲ့ အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ KNU သတင်းထုတ်ပြန်ရေးက ကြေညာတယ်။ တောင်ပိုင်းလေတပ်ကွပ်ကဲ ဌာနချုပ်က အရာခံဗိုလ် ဗိုလ်လေးပြည့်စုံထွန်း CDM ဝင်လာတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဒီတော်လှန်ရေးက ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့ မထောက်ခံသူတွေအကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်လာပြီ။ ဘက်ရွေးမှန်ဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။
ဗီဒီယို ဥပဒေကို ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ကြေး တိုးပြီး မိအောင်လှိုင် လက်မှတ်နဲ့ ပြဌာန်းလိုက်တယ်။ ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီး မေ ၃ ရက်နောက်ပိုင်း ဘဏ်စာရင်းအသစ်ဖွင့်ရင် ငွေ အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီး စာထုတ်တယ်။ ငွေထုတ်ဖို့ကိုပဲ ငွေစာရင်းအသစ် ဖွင့်ရဦးမယ်တဲ့လား။ မြန်မာငွေ လိုနေပုံက ဟန်တောင်မဆောင်နိုင်အောင်ပဲ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သန်းကို ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ရောင်းတယ်။ ၅၀၅ နဲ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရင် ဝရမ်းရုတ်သိမ်းပေးမယ်လို့ စစ်သူပုန်က ကြေညာတယ်။ FTTH တွေ ညဘက် အင်တာနက် ဖြတ်တာကို မဖြတ်တော့ပဲ ၂၄ နာရီ ပြန်သုံးလို့ရသွားပြီ။ ကျန်တာတွေကတော့ ဖြတ်ထားတုန်းပဲ။ CDM ဝန်ထမ်းတွေကို လစာပေးဖို့ NUG က လုပ်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ ပါတဲ့ PPST က NUG ကို ထောက်ခံကြောင်း ကြေညာတယ်။
ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့။ Mobile internet တွေ ပြန်ဖွင့်မပေးသေးတာ သူတို့ ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်နေလို့ မဖွင့်သေးတာ။ CDM လုပ်နေတဲ့ MPT ဝန်ထမ်းတွေကို ဖိအားပေး ရုံးတက်ခိုင်းပြီး ဟံသာဝတီ National Gateway မှာ အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေကို စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်ဖို့ devices တွေကို တပ်ဆင်နေတယ်လို့ MPT က network engineer တစ်ယောက်က ဆိုတယ်။ အဲ့ လိုလုပ်ဖို့အတွက် လည်း Huawei က ကူညီတယ်လို့လည်း သိရတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာလားတော့ မသိဘူး။ ကနေ့ facebook မှာလည်း Baidu Cloud, Huawei Cloud ကြော်ညာတွေ sponcered post နဲ့ တက်လာတယ်။ KIA အလောဘွမ် စခန်းကို လေကြောင်းကနေ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်တာတွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်။ တရုတ်ဘက်က လေယာဉ်တွေပါ ပါလာတယ်လို့ လည်း သတင်းတွေ ကြားရတယ်။ EAO တွေ လိုအပ်နေတာ လေကြောင်းတိုက်စစ်ကို ပြန်လည် ခုခံနိုင်တဲ့ လက်နက် ကရိယာတွေ ပဲ။ အခုက လေယာဉ်လာတာကို အသံ နားထောင်ပြီး ထွက်ပြေးတာကိုပဲ လုပ်နိုင်နေတာ။ ပြည်တွင်းစစ်မှာ လေယာဉ်သုံးတာ တော်တော် လွန်တယ်။
ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့။ NUG က CDM ဝန်ထမ်းတွေကို လစာပေးနိုင်ဖို့ပြင်နေပြီ လို့ ကြေညာစာ ထုတ်ထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ CDM ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ နဲ့ မီးရထား ဝန်ထမ်း အပါအဝင် တော်တော်များများ လစာ မရကြသေးလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်။ Mobile Internet တွေ ဖြတ်တောက်ခံရတာနဲ့ လူတွေ ပိုက်ဆံ ကို cash ပဲ ကိုင်ကြချင်တော့တဲ့ ပြဿနာရဲ့ အဆက်တွေလည်းပါတယ်။ ကနေ့ဆို ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက CDM အတွက် ပိုက်ဆံ ကို personally လွှဲဖို့ wave ကနေ လွှဲလိုက်တာ ၁ သိန်း အထက်မို့ agent ဆိုင်တွေက ထုတ်မပေးဘူး။ NUG , EAOs နဲ့ စစ်သူပုန်တွေ ညှိကြဖို့ လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလည်း ကြားရတယ်။ ၅၀၅ စာရင်းထဲမှာ ဘောမ အကြီးစားတွေ ပါလာတယ်။ ဘာသဘောလဲ တော့ မသိ။ KIA, KNU ဘက်တွေမှာတော့ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်တုန်းပဲ။ စစ်ခွေးတွေ အကျအဆုံးများနေတယ်။ သာလွန်အင်အား သာလွန်လက်နက်နဲ့ တိုက်တာကိုပဲ စစ်ခွေးတွေ ရှုံးတာ။ တူးမီးနဲ့ ပြန်တိုက်တဲ့ ချင်း တွေ ကိုတောင် ရှုံးတာ ဆိုတော့လည်း မထူးဆန်းဘူး။ သာယာဝတီမြို့နယ်က ခလရ ၃၅ လက်နက်တိုက် မီးလောင်တယ်။ UG မှာလည်း နာနတ်သီး ရောင်းအားကောင်းတယ်။ အုန်းလက်တွေလည်း ဝယ်လိုအားများနေတယ်။ NUG နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် Chinland ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (ပလက်ဝ) ဖွဲ့လိုက်တယ်လို့ သတင်းတက်လာတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ချင်အက်ဥပဒေ ကို ကျင့်သုံးမယ် လို့ဆိုတယ်။ အကုန်လုံးက D-Day ကို စောင့်နေကြတာ။ ရောက်ဖို့ကလည်း သိပ်မလိုတော့ဘူး။ မိတ္ထီလာနဲ့ မကွေး လေတပ်စခန်းတွေ ဒုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရတယ်။ ၂၀၁၉ လောက်တုန်းက မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက မေမြို့စစ်ကျောင်းတွေကို ရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ ပစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခု မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ကို ရှော့တိုက်ဒုံးရောက်လာပြီ။ ပြည်တွင်းစစ်က နယ်စွန်နယ်ဖျား တိုင်းရင်းသားဒေသမှာတောင် မဟုတ်ပဲ ပြည်မမှာပါ ရောက်လာမယ့် အရိပ်အရောင်စတွေ့ရတာပေါ့။ တောင်တန်း ပြည်မ မခြား ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့မှာ ဆိုပေမယ့် တော်လှန်ရေးက အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို မရောက်သေးဘူး။ ပြည်မကို ရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာတော့ အဲ့အခြေအနေကို ရောက်လာနိုင်တယ်။ မီးပြတ် ရေပြတ် စားစရာပြတ် တဲ့ အခြေအနေအထိ ရောက်လာနိုင်တယ်။ နယ်ဘက်တွေမှာ အဲ့တာတွေက ပြဿနာကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ပေမယ့် ရန်ကုန်လို မြို့ပြကြီးမှာတော့ ပြဿနာ အကြီးကြီးပဲ။ ကျွန်တော်အပါအဝင် လူတော်တော်များများက အဲ့တာကို မျှော်လင့်နေကြတယ် လို့ ထင်တယ်။ သူတို့ လက်ထဲ တိုင်းပြည် မအပ်နိုင်မယ့်အတူတူ Failed State ဖြစ်သွားစေချင်နေကြတာ။ အဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတော့မယ်။ FTTH internet တွေ ၂၄ နာရီပြန်ဖွင့်ထားပေမယ့် VPN ကြောင်တာတွေ လိုင်းနှေးတာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘာတွေ ကြိတ်လုပ်နေလဲတော့မသိဘူး။ မဟုတ်တာလုပ်နေတာပဲ ဆိုတာတော့ သေချာတယ်။
ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့။ ကိုဗစ်ကြောင့်ရော Coup ကြောင့်ရော မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးက အောက်ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဆင်းနေတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် လူဦးရေ တဝက်နီးနီး ဒါမှမဟုတ် ၂၅ သန်းခန့်ဟာ တစ်ဦးကို ဝင်ငွေ 1$ လောက်ပဲ ရှိတော့မယ်လို့ UN က ဆိုပါတယ်။ နောက် ၆ လနေရင် လူဦးရေ ၃ သန်းဟာလည်း အငတ်ဘေးဆိုက်မှာပါတဲ့။ ( ဒါ့ကြောင့်မို့နေမယ်။ coup ဖြစ်ပြီး လပိုင်းအတွင်း မြန်မာပြည်မှာလုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် NGO လိုင်စင်အသစ် အမေရိကန်အစိုးရက ချပေးလိုက်တယ်လို့လည်း တဆင့်စကား ကြားခဲ့ရတယ်။ ) Covid 3rd wave က လည်း လာဦးမယ်။ လုပ်ငန်းအသေးတွေ အကုန်နီးပါး ဖျက်သိမ်းသွားပြီး လုပ်ငန်းကြီးတွေလည်း လည်ပတ်နိုင်ရုံ အဆင့်ပဲ ရှိမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါတောင် ဒီခန့်မှန်းချက်တွေက UN က လျော့ပြီး တွက်ထားတာ။ ဒီထက် များဖို့ပဲ ရှိတယ်။ နောက် ၂ လ အတွင်းဖြစ်မယ့်ဟာတွေကတော့ ဒီ တွက်ချက်မှု့တွေကို ပြောင်းလဲ စေနိုင်မှာဖြစ်တယ် လို့လည်း ဆိုတယ်။ အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်တောင် အများဆုံး ဆုကြေးက သိန်း ၅ ထောင်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ထီထိုးတဲ့ သူတောင် ရှိပါ့မလားပဲ။ လူတွေ ငွေကြေးကြပ်တည်းနေတဲ့ အချိန် ထီ ထိုးဖို့ စိတ်ကူးမယ် မထင်ဘူး။ ဒီကောင်တွေ ငွေကို ဘယ်နေရာက ရနိုင်မလဲ ဆိုပြီး အသည်းအသန် ငွေရှာနေကြတာ အသိသာကြီး။ Mobile data နဲ့ banking app တွေ ပြန်သုံးနိုင်ပေမယ့်လည်း နေရာ တော်တော်များများမှာ cash only ပဲ အဆင်ပြေတယ်။
တပ်တွင်းမှာလည်း ဖြုတ် ထုတ် သတ် ဇာတ်လမ်းတွေ လာတော့မယ် ထင်တယ်။ သတင်း နည်းနည်း ထွက်နေတယ်။ KIA တပ်ရင်း ၂၅ ကို စစ်သူပုန်တွေက လေကြောင်းကနေ အသည်းအသန်တိုက်နေတယ်။ သူတို့နိုင်တာ ဒါပဲ ရှိတာကိုး။ KNU က ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်က စစ်သူပုန်စခန်း ၃ ခု သိမ်းနိုင်ပြီဂ ကရင်အလံ လွင့်လိုက်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဖားကန့်မှာ စက်သုံးဆီ ပို့တာကို ဖြတ်လိုက်တယ်။ ညနေကျတော့ ဆန်နဲ့ ဆီ တင်သွင်းတာကိုလည်း ပိတ်လိုက်တယ်။ ဖြတ် ၃ ဖြတ် ကတော့ စပြီ။ နိုင်ငံအနှံ့ စစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ပြီး တိုက်သာတိုက်နေတာ သူတို့ ဝါဒဖြန့် MWD MRTV မှာကျတော့ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး တစ်လ ကြေညာထားတယ်ဆိုပဲ။ ဆိုတော့ ဒီလောက်ယုတ်မာနေတဲ့ သူတွေနဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေး ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကို မရှိသင့်တော့တာ။ ဒီကောင်တွေကို အမြစ်ဖြတ်မှ ပဲ ရမှာ။
စစ်သူပုန်တွေလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အရင် တွေ့နေကျ ဇော်မဲလုံး မဟုတ်တော့ပဲ ဗိုလ်ကြီး အေးသဇင်မြင့် ကိုပွဲထုတ်လာတယ်။ သူ့နောက်ကြောင်းကို လိုက်တော့ professional သတင်းသမားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ၄နှစ်နီးပါး အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး စစ်တပ်မိသားစုက လာတဲ့ သူ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကို တက်ပြီး ဗိုလ်ကြီး ဖြစ်လာတာ ဆိုတော့ လျော့တွက်လို့တော့ မရတော့ဘူး။
အင်တာနက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
When I buyamobile phone